3001s &quot;Finoana iray izay misahana olana&quot; miaraka amin&#39;ny pasitera Rick Warren images and subtitles
- Salama, ianareo rehetra, izaho Rick Warren, pasitera ao amin'ny fiangonana Saddleback ary mpanoratra ny "Ilay tanjon'aina mitondra soa" ary mpiteny momba ny fandaharana "Daily Hope". Misaotra anao nivezivezy tamin'ity onjam-peo ity. Fantatrao, amin'ity herinandro ity eto Orange County, Kalifornia, nanambara ny governemanta fa handrara ny fivoriana rehetra amin'ny karazany rehetra, na firy mandra-pahatapitry ny volana. Koa miarahaba anao ao amin'ny Fiangonana Saddleback ao an-trano. Faly aho ianao eto. Ary mampianatra anao amin'ny alàlan'ny horonantsary aho eo anelanelan'ny ankehitriny ary isaky ny mifarana ity krizy COVID-19 ity. Koa miarahaba anao ao amin'ny Fiangonana Saddleback ao an-trano. Ary te-hanasa anao hanaraka ahy isan-kerinandro, tafiditra ao anatin'ireny fotoam-pivavahana ireny miaraka. Hanao mozika sy hivavaka miaraka izahay, ary handefa teny avy ao amin'ny Tenin'Andriamanitra aho. Fantatrao, araka ny nieritreretako an'izany, amin ny fomba voalohany, mila lazaiko aminao aloha. Nieritreritra aho fa hanafoana anay ny fihaonana. Ary tamin'ity herinandro ity dia nanana ny studio Saddleback aho nifindra tany amin'ny garazy nisy ahy. Tena ampirimina eto amin'ny garazy aho ity. Ilay mpanamory teknolojia. Mandrosoa, ry zalahy, manaova veloma ny rehetra. (Mihomehy) Nanampy izy ireo namindra izany teto ary hametraka izany mba hiresahanao aminao isan-kerinandro. Ankehitriny, rehefa nieritreritra izay tokony ho tarehinao nandritra io krizy COVID-19 io, Avy hatrany dia nieritreritra ny bokin'i Jakoba aho. Ny bokin'i Jakoba dia boky kely manakaiky ny fiafaran'ny Testamenta Vaovao. Fa tena azo ampiharina izy io ary tena manampy, ary miantso ity boky ity aho ho finoana izay miasa rehefa tsy misy ny fiainana. Ary nieritreritra aho fa raha misy ilaina amin'izao fotoana izao, mila finoana izay miasa isika raha tsy tsia ny fiainana. Satria tsy mandeha tsara intsony izao. Ary izao, amin'ity herinandro ity, hanomboka isika dia miaraka hankahery anao Amin'izao krizy izao. Ary tsy tiako ny tsy ahitan'ireto hafatra ireto. Satria ny bokin'i Jakoba dia mirakitra fahitana 14 lehibe fananganana andiam-piainana, olana lehibe 14, Faritra 14 izay isaky ny anareo efa niatrika ny fiainanao, ary hiatrika ny ho avy ianao. Ohatra, ao amin'ny toko iray amin'i James, avelao aho hanome anao topimaso kely momba ilay boky. Toko efatra fotsiny izy. Toko voalohany, miresaka zava-tsarotra aloha izy. Ary hiresaka momba izany isika androany. Inona no tanjon'Andriamanitra amin'ny olanao? Avy eo dia miresaka ny safidy izany. Ahoana no ahaizanao ny sainao? Ahoana no ahalalanao hoe rehefa mijanona, oviana no handeha? Ahoana no ahalalanao ny tokony hatao, ny fomba handraisanao fanapahan-kevitra? Ary avy eo miresaka momba ny fakam-panahy. Ary hojerentsika ny fomba handresena ireo fakam-panahy iraisana amin'ny fiainanao izay toa tsy mitsahatra mitarika anao tsy mahomby. Ary avy eo miresaka momba ny fitarihana izy io. Ary miresaka momba ny fomba hahazoantsika fitahian'ny Baiboly izany. Tsy vakio fotsiny, fa hitahy azy. Ao izany ao amin'ny toko voalohany. Ary hojerentsika ireo ao anatin'ny herinandro ho avy. Ny toko roa dia miresaka momba ny fifandraisana. Hojerentsika ny fomba hitondranao tsara ny olona. Ary miaraka amin'ny olona tsy maintsy mijanona ao an-trano, ao daholo ny fianakaviana, ny zaza sy ny reny ary ny dada ary ny olona dia miraikitra amin'ny haratony tsirairay avy. Izany no ho hafatra lehibe amin'ny fifandraisana. Avy eo dia miresaka momba ny finoana izany. Ahoana no tena itokisanao an'Andriamanitra rehefa tsy tianao izany? ary rehefa mandeha ny zavatra mandeha? Ao izany ao amin'ny toko faharoa. Toko telo, hiresaka resaka isika. Ny herin'ny resaka. Ary izany no iray amin'ireo andalan-tsoratra lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly ny fomba fitantanan'ny vavanao. Izay no zava-dehibe na anaty krizy isika na tsia. Ary avy eo miresaka momba ny fisakaiza izy io. Ary manome fampahalalana tena azo ampiharina amintsika izany amin'ny fomba ahoana no hampiorenanao namana tsara ary aza manalavitra namana. Toko telo izany. Ny fizarana faha-efatra dia mifanohitra. Ary ao amin'ny toko faha-efatra dia miresaka isika ahoana no hialanao amin'ny fifamaliana. Ary tena hanampy anao izany. Rehefa mitombo ny fifanolanana ary mitombo ny fahasosorana. rehefa tsy miasa ny olona, ​​ahoana ny fomba hisorohana ny fifamaliana? Ary avy eo miresaka momba ny fitsarana ny hafa. Ahoana no hialanao amin'ny filalaovana an'Andriamanitra? Mety hiteraka fandriampahalemana be eo amin'ny fiainantsika izany raha afaka manao izany isika Ary avy eo miresaka momba ny ho avy. Ahoana ny fomba hanoratanao ny ho avy? Izay no ao amin'ny toko faha-efatra. Ankehitriny, efa nolazaiko tao amin'ny toko farany, toko faha-dimy nisy toko efatra, misy raha ny marina dimy toko ao amin'ny Jakoba. Hiresaka momba ny vola isika. Ary miresaka momba ny hoe tokony ho hendry amin'ny harenao izy. Ary avy eo isika dia mandinika faharetana. Inona no ataonao rehefa miandry an'Andriamanitra ianao? Ny efi-trano sarotra indrindra dia ao amin'ny efitrano fiandrasana rehefa maika ianao fa tsy Andriamanitra. Ary avy eo isika hijery ny vavaka, izay ny hafatra farany hojerentsika. Ahoana no hivavahanao ireo olanao? Ny Baiboly milaza fa misy ny fomba hivavaka sy hahazoana valiny, ary misy fomba iray tsy tokony hivavahana. Ary hojerentsika ny momba izany. Ankehitriny, hitantsika hijery ireo andininy enina voalohany amin'ny bokin'i Jakoba. Raha tsy manana Baiboly ianao, dia tiako ianao ny maka ivelan'ity tranokala ity, ny drafitra fampianarana, satria ny andininy rehetra no hojerentsika eo amin'ny drafitrao ve ianao? Jakoba toko voalohany, ireo andininy enina voalohany. Ary ny Baiboly no milaza izany rehefa miresaka io miatrika ireo olanao. Voalohany, ny Jakoba 1: 1 no miteny an'io. Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo amin'ny foko 12 miparitaka any amin'ireo firenena, arahabaina. Ankehitriny, avelao aho hiato kely mandritra ny iray minitra ary hiteny ity no fampidiran-dresaka indrindra amin'ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly. Satria fantatrao hoe iza i James? Zanakalahin'i Jesosy izy. Inona no tianao holazaina? Midika izany fa zanak’i Maria sy Josefa izy. Zanak’i Maria irery i Jesosy. Tsy zanak'i Josefa izy fa rain'i Jesosy Andriamanitra. Fa ny Baiboly milaza amintsika fa i Maria sy i Josefa Nanana zanaka maro taty aoriana, ary nanome antsika ny anarany mihitsy aza. Tsy kristiana i James. Tsy mpanara-dia an'i Kristy izy. Tsy nino izy fa ny rahalahin'ny rahalahiny dia ny Mesia nandritra ny ministeran'i Jesôsy manontolo. Natoky tena izy. Ary mety hoheverinao izany, zandriny izay tsy mino amin'ny zokiolona iray, tsara izany, dia ho tsotra. Inona no nahatonga an'i Jakoba hino an'i Jesosy Kristy? Ny Fitsanganana amin'ny maty. Rehefa niverina tamin'ny maty Jesosy dia nandehandeha nandritra ny 40 andro sisa dia nahita azy i James. tonga mpino izy ary lasa mpitarika tao amin'ny Fiangonan'i Jerosalema. Ka raha misy manan-jo handatsaka anarana, dia io lehilahy io. Afaka nilaza izy, ry James, ilay bandy niara-lehibe tamin'i Jesosy. Jakoba, antsasaky ny rahalahin'i Jesosy. Jakoba, ilay sakaizan'i Jesosy izay lehibe tokoa. Ireo zavatra ireo, nefa tsy. Nilaza tsotra fotsiny i James, mpanompon'Andriamanitra. Tsy misintona laharana izy, tsy mampiroborobo ny maha-izy azy. Fa teo amin'ny andininy roa kosa dia nanomboka niditra izy io resaka voalohany momba ny fikasan'Andriamanitra io amin'ny olanao. Mamelà ahy hamaky izany aminao. Hoy izy, rehefa ny fitsapana isan-karazany tafahoatra amin'ny fiainanao, aza tezitra amin'izy ireo ho toy ny mpanao an-keriny fa arahabaina ry zareo ho namana. Fantaro fa ho avy hizaha toetra ny finoanao izy ireo, ary mamokatra ao aminao ny hatsaran'ny fiaretana. Fa avelao hitohy izany fizahana izany mandra-paharetana izany dia mivoatra tanteraka, dia ho lasa olona ianao amin'ny toetra matotra sy ny fahatokiana tsy misy faritra malemy. Izany no dikanteny Phillips ao amin'ny Jakoba toko voalohany, andininy roa ka hatramin'ny enina. Ankehitriny, hoy izy rehefa tonga amin'ny fiainanao ny karazana fitsapana rehetra ary mitobaka eo amin'ny fiainanao izy ireo, hoy izy, aza tezitra aminy amin'ny maha-mpaka an-keriny azy dia tongasoa azy ho namana. Hoy izy, manana olana ianao, mifalia. Nanana olana ianao, mifalia. Nanana olana ianao, mitsiky. Ankehitriny, fantatro ny hevitrao. Mandeha ianao, kinanjo ve ianao? Nahoana aho no tokony ho faly momba ny COVID-19? Maninona aho no mandray ireo fitsapana ireo eo amin'ny fiainako? Ahoana no mety hitranga? Ny fanalahidin'ny an'io toetra io amin'ny fitazonana hatrany toe-tsaina tsara ao anatin'ny krizy ny teny mahatsapa, ny teny tonga saina. Hoy izy, rehefa ireo karazana fitsapana rehetra ireo tafahoatra amin'ny fiainanao, aza tezitra amin'izy ireo ho toy ny mpanao an-keriny fa raiso ny maha-namana azy, ary fantaro, fantaro, tonga izy ireo mba hizaha toetra ny finoanao. Ary avy eo izy dia manohy, inona no vokariny eo amin'ny fiainany. Ny noteneniny eto dia ny fahombiazanao hitantana anao ny herinandro izay eo alohanay ao amin'ity aretina ity COVID-19 izao dia manerana an'izao tontolo izao, ary mihamaro hatrany Mihidy ny firenena, ary mihidy izy ireo trano fisakafoanana ary manidy fivarotana izy ireo, ary manidy sekoly izy ireo, ary manidy fiangonana izy ireo, ary manidy toerana rehetra izy ireo izay mivory olona, ​​ary toy ny eto Orange County, izay tsy avela hihaona amin'iza amin'ity volana ity. Hoy izy, ny fahombiazanao hiatrehana ireo olana ireo dia ho tapa-kevitra amin'ny fahalalanao. Ny fahalalanao. Ary amin'ny fihetsikao amin'ireo olana ireo. Izay no tsapanao, io no fantatrao. Izao, ny zavatra voalohany amin'ity andalana ity dia tiako ho tsapanao dia Andriamanitra no manome fampahatsiahivana efatra momba ny olana. Azonao atao ny manoratra ireo. Fahatsiarovana efatra momba ny olana eo amin'ny fiainanao, izay ahitana ny krizy izay hatrehantsika izao. Laharana voalohany, hoy izy voalohany, fa tsy azo ihodivirana ny olana. Tsy azo ihodivirana ny olana. Izao izy, ahoana no fomba ilazany izany? Nilaza izy fa rehefa tonga ny karazana fitsapana rehetra. Tsy miteny izy raha tonga ny karazana fitsapana rehetra, hoy izy hoe rahoviana. Azonao atao ny miantehitra amin'izany. Tsy ity lanitra ity izay lavorary ny zava-drehetra. Ity no Tany izay potika ny zava-drehetra. Ary milaza izy fa hanana olana ianao, hanana sarotra ianao, afaka manantena azy io, afaka mividy stock ao anatiny ianao. Ankehitriny, tsy zavatra nolazain'i James irery izany. Hita ao amin'ny Baiboly daholo izany. Nilaza i Jesosy eo amin'izao tontolo izao dia hanana fitsapana ianao ary fakam-panahy, ary hahazo fahoriana ianareo. Nilaza izy fa hanana olana eo amin'ny fiainana. Koa nahoana no talanjona isika rehefa manana olana? Nilaza i Peter fa aza gaga rehefa mandalo fisedrana mirehitra. Nilaza fa aza manao zavatra vaovao. Mandalo fotoan-tsarotra ny olon-drehetra. Sarotra ny fiainana. Tsy lanitra izany, ity dia Tany. Tsy misy olona hiaro tena, tsy misy mitokana tsy nisy niniana, tsy nisy nanilika olona. Nilaza izy fa hanana olana ianao satria tsy azo ihodivirana. Fantatrao, tadidiko indray mandeha aho fony tany amin'ny oniversite. Taona maro lasa izay dia nandalo aho tena sarotra. Ary nanomboka nivavaka aho, dia hoy aho: "Andriamanitra, omeo faharetana aho." Ary raha tokony hihatsara ny fitsapana dia miharatsy hatrany hatrany. Dia hoy aho hoe: "Andriamanitra dia tena mila faharetana" ary niharatsy ny olana. Dia hoy aho hoe: "Andriamanitra dia tena mila faharetana" ary miharatsy hatrany koa izy ireo. Inona no nitranga? Eny, tsapako ihany fa rehefa afaka enim-bolana teo ho eo, Manam-paharetana be lavitra noho ny tamin'ny nanombohako aho, fa ny fomba nampianarin'Andriamanitra ahy faharetana dia tao anatin'ireo zava-tsarotra ireo. Ankehitriny, ireo olana dia tsy karazana fampianarana voafidy manana safidy ianao raisinao amin'ny fiainana. Tsia, takiana izy ireo, tsy afaka misafidy azy ireo ianao. Mba hahazoana diplaoma amin'ny sekolin'ny fiainana, dia mandia ny sekolin'ny kapoka mafy ianao. Handalo olana ianao, tsy azo ihodivirana izy ireo. Izany no lazain'ny Baiboly. Faharoa, izany no lazain'ny Baiboly momba ny olana. Miovaova ny olana, izany dia tsy mitovy daholo. Tsy mahazo olana mitovy ianareo. Mahazo ireo be dia be hafa. Tsy vitan'ny hoe mahazo fotsiny ianao fa mahazo hafa. Hoy izy rehefa iharam-pitsapana ianao, rehefa manana olana amin'ny karazany maro ianao. Azonao atao ny manao fehezanteny hoe raha manamarika ianao. Rehefa tonga amin'ny fiainanao ny karazana fitsapana rehetra. Fantatrao fa zaridaina aho ary indray mandeha no nianatra. ary hitako fa ny fanjakana eto tany Etazonia no nanasokajiana azy Karazan-tsimparifary 205 isan-karazany. Mino aho fa mitombo ny 80% amin'izy ireo ao amin'ny zaridainako. (Mihomehy) Matetika aho no mieritreritra fa rehefa mihinana legioma aho. Tokony handoa ny fidirana any amin'ny fiompiana ahitra i Warren. Fa misy karazana tsimparifary maro, ary maro ny fitsapana, marobe fa misy ny olana. Tonga amin'ny habe rehetra izy ireo, tonga amin'ny endriny rehetra. Misy tsirony 31 mahery. Io teny io eto dia ny karazany rehetra, izay misy io voalaza io misy karazana fitsapana amin'ny fiainanao, raha ny marina amin'ny teny grika dia midika hoe maro be. Raha lazaina amin'ny teny hafa, misy alokaloka be dia be amin'ny fiainanao, hanaiky izany ve ianao? Maro ny alokaloka miady saina. Tsy mitovy ny fijerin'izy ireo. Misy olana ara-bola, misy fihenjanan-tsaina misy adin-tsaina, misy adin-tsaina, misy adin-tsaina. Nilaza izy fa samy hafa ny loko rehetra. Fa raha mivoaka sy mividy fiara ianao dia maniry loko namboarina, dia mila miandry azy ianao. Ary rehefa vita, dia azonao ny lokanao mahazatra. Izany no tena teny izay nampiasaina teto. Fomba mahazatra sy fitsapana maro samihafa eo amin'ny fiainanao izany. Avelan’Andriamanitra hanana antony izy ireo. Ny sasany amin'ireo olanao dia tena namboarina manokana. Ny sasany tamin'izy ireo dia samy niara-niaina taminay rehetra, tahaka io, COVID-19. Saingy miteny izy fa miovaova ny olana. Ary ny tiako holazaina dia samy hafa ny hamafiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mafy ny nahatongavan'izy ireo. Miovaova matetika izy ireo, ary izany dia hafiriana. Tsy fantatsika hoe rahoviana no haharitra izany. Tsy haintsika ny fomba mahomby. Nahita famantarana aho ny andro iray izay nilaza hoe, "Hilatsaka ny ranonorana amin'ny fiainana rehetra. "fa mampihomehy izany." (Mihomehy) Ary ataoko fa izany no fomba Betsaka ny olona mahatsapa dieny izao. Fihomehezana izany. Tsy azo ihodivirana ny olana ary miovaova. Ny zavatra fahatelo nolazain'i James mba tsy ho gaga isika ny olana dia tsy ampoizina. Tsy hay tsy ampoizina izy ireo. Hoy izy rehefa mivory eo amin'ny fiainanao ny fitsapana, raha mandray tsikera ianao, afatory io fehezanteny io. Izy ireo dia mirotsaka ao amin'ny fiainanao. Jereo, tsy misy olana mitranga rehefa mila izany ianao na rehefa tsy mila izany ianao. Tonga tokoa izy rehefa te ho avy. Izay no ampahany amin'ny antony mahatonga azy io olana. Ny olana dia tonga amin'ny fotoana tsy ampoizina indrindra. Efa nahatsapa olana toy izany ve ianao tonga teo amin'ny fiainanao, ianao mandeha, tsy izao. Tena toy ny ankehitriny? Eto amin'ny Saddleback Church, dia nanao fampielezan-kevitra lehibe izahay manonofy momba ny ho avy. Ary tampoka teo dia nandona ny koronavirus. Ary handeha aho izao. (akoho) Tsy izao. Efa nanao kodiarana matevina ve ianao rehefa tara? Tsy mahazo kodiarana matevina ianao rehefa be fotoana. Maika ianao hamonjy toerana. Toy ny zazakely mitafy ny lambanao vaovao eny am-pandehanana mandritra ny fiaraha-mientana lehibe amin'ny takariva. Na nosarahinao ilay pataloha alohan'ny hitenenana. Nitranga tamiko izany indray mandeha tamin'ny alahady lasa izay. Misy olona tsy manam-paharetana, tsy afaka miandry varavarana mihodina izy ireo. Manana fotsiny izy ireo, dia tokony hataony ihany, tsy maintsy manao izany izy ireo izao, tokony hataon'izy ireo izao. Tadidiko taona maro lasa izay fa tany Japon aho, ary nijanona teo amin'ny arabe iray niandry ny gara aho ho tonga, ary rehefa hisokatra dia nivoha ny varavarana. ary nisy tovolahy Japoney iray avy hatrany nandoa ahy ny projectile raha nijoro tao aho. Ary nieritreritra aho, nahoana aho, nahoana izao? Izy ireo dia tsy azo inoana, tonga izy ireo rehefa tsy mila 'em. Tsy fahita firy no maminavina ny olana eo amin'ny fiainanao. Ankehitriny mariho, hoy izy rehefa miatrika fitsapana isan-karazany, rehefa, tsy azo ihodivirana, karazany daholo, miovaova izy ireo, olona maro eo amin'ny fiainanao, izany no tsy ampoizina, Nilaza izy fa aza tezitra amin'izy ireo tahaka ny mpaka an-keriny. Inona no lazainy eto? Eny, hazavaiko amin'ny antsipiriany io. Fa izao no zavatra fahefatry ny Baiboly momba ny olana. Manana olana ny olana. Manana olana ny olana. Manana tanjona amin'ny zava-drehetra Andriamanitra. Na ny zava-dratsy mitranga eo amin'ny fiainantsika aza, Mahavita zavatra tsara avy amin'izy ireo Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy mila mahatonga ny olana rehetra. Ny ankamaroan'ny olana mahatonga antsika manokana. Milaza ny olona, ​​fa maninona no marary ny olona? Eny, ny antony iray dia ny tsy anaovantsika izay lazain'Andriamanitra hataontsika. Raha nihinana izay nasain'Andriamanitra nohaninay isika, raha natory toa an'i Andriamanitra isika, mba hahita fitsaharana. raha manao izay takian'Andriamanitra isika hampihatra. raha tsy navelanay hitarika ny fiainantsika ny fihetseham-po ratsy sahala amin'ny lazain'Andriamanitra, raha mankatò an'Andriamanitra isika, tsy hanana ny ankamaroan'ny olanay izahay. Ny fandinihana natao dia naneho fa manodidina ny 80% amin'ny olana ara-pahasalamana amin'ity firenena ity, any Amerika, dia vokatry ny antsoina safidin'ny fomba fiaina mitaiza. Amin'ny teny hafa, tsy manao ny tsara fotsiny isika. Tsy ataonay ny zavatra mahasalama. Matetika isika no manao manimba-tena. Fa izay lazainy eto dia misy tanjona ny olana. Hoy izy rehefa sendra olana ianao, mahatsapa fa tonga hamokatra izy ireo. Asio fehezanteny izany, tonga hamokatra izy ireo. Mety hahomby ny olana. Ankehitriny, tsy mandeha mahomby izy ireo. Io virus virus COVID io, raha tsy mamaly amin'ny andro mety aho. tsy hamokatra zavatra lehibe eo amin'ny fiainako izany. Fa raha mamaly amin'ny fomba mety aho. na dia ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fiainako aza afaka mamokatra sy mahazo tombony ary fitahiana, amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainako. Tonga hamokatra izy ireo. Izy dia milaza eto fa ny mijaly sy ny adin-tsaina ary ny alahelo, eny, ary na dia ny aretina aza dia mahavita zavatra iray mahasoa raha avelantsika izy. Ao amin'ny safidintsika rehetra izany, ao anatin'ny fihetsintsika. Mampiasa ny fahasahiranana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Hoy ianao nefa dia ahoana no fomba anaovany an'izany? Ahoana no ampiasan'Andriamanitra ny olana sy ny olana amin'ny fiainantsika? Misaotra anao mangataka, satria ny tohiny manaraka na ny ampahany amin'ny andininy manaraka Mampiasa fomba telo Andriamanitra. Fomba telo, mampiasa fomba telo eo amin'ny fiainanao Andriamanitra telo. Voalohany, mizaha ny finoako ny olana. Izao, ny finoanao dia toy ny hozatra. Tsy azo hamafisina ny hozatra raha tsy nosedraina, raha tsy hoe ahinjitra, raha tsy atsofoka. Tsy mampisy hozatra mahery ianao raha tsy manao na inona na inona. Mivelatra hozatra mahery ianao amin'ny alàlan'ny fanitarana azy ireo ary manatanjaka azy ireo sy hizaha toetra azy ireo ary manosika azy ireo amin'ny fetra. Ka izy nilaza fa ny olana no tonga fitsapana ny finoako. Nilaza izy fa tonga mba hizaha toetra ny finoanao. Ankehitriny, io teny fitiliana io eo, izany dia teny tamin'ny andron'ny Baiboly izay nampiasaina hanadiovana metaly. Ary ny hataonao dia te handray metaly sarobidy toy ny volafotsy na volamena na zavatra hafa, dia atsipy ao anaty vilany lehibe iray ianao, ary taosinao ny hafanana amin'ny hafanana avo be, nahoana? Ao amin'ny mari-pana, may daholo ny loto rehetra. Ary ny hany sisa tavela dia ilay volamena madio na ny volafotsy madio. Izany no teny grika eto hizaha toetra. Afo mamelona io rehefa apetrak'Andriamanitra ny hafanana ary mamela izany eo amin'ny fiainantsika, mandoro zavatra tsy manan-danja izy. Fantatrao ve izay hitranga amin'ny herinandro ho avy? Stuff izay noheverinay rehetra fa tena zava-dehibe, tsapanay, hmm, nifanaraka aho tsara fotsiny fa tsy misy an'izany. Hanamboatra indray ny laharam-pahamehantsika izany, satria hiova ny zavatra. Ankehitriny, ny ohatra mahazatra amin'ny fomba hanaporofoan'ny olana ny finoanao no tantara momba an'i Joba ao amin'ny Baiboly. Misy boky iray manontolo momba an'i Joba. Fantatrao fa i Joba no lehilahy manankarena indrindra ao amin'ny Baiboly, ary tamin'ny andro iray, very ny zavatra rehetra izy. Namoy ny ankohonany rehetra izy, very ny fananany rehetra, namoy ny sakaizany rehetra izy, nanafika ny fianakaviany ny mpampihorohoro, nahazo aretina mitaiza sy nahatsiravina mafy izy tsy azo sitrana tsara. Eny ary, izy no terminal. Ary na izany aza, Andriamanitra dia nitsapa ny finoany. Ary naverin'Andriamani- tra indray izy taty aoriana izay nananany alohan'ny nandalovany ny fitsapana lehibe. Indray mandeha dia efa namaky teny fohy iray aho efa ela izay nilaza fa ny olona dia toy ny kitapo dite. Tsy fantatrao izay ao am-pony mandra-panidinanao ao anaty rano mafana. Ary avy eo ho hitanao ny tena ao anatiny. Efa nahita ny andro mafana ve ianao? Nanana iray tamin'ireny herinandro mafana na volana iny ve ianao? Efa ao anaty rano mafana isika izao. Ary ny zavatra hivoaka avy aminao dia inona ny ao anatinao. Tahaka ny marary nify. Raha manana fantsona nify aho ka manosika azy. Inona no ho avy? Hoy ianao dia tsara, toothpaste. Tsia, tsy voatery. Mety hiteny fofona nify any ivelany, fa afaka saosy marinara na voanjo na voaniho ao anatiny. Inona no hivoaka rehefa voatsindry fanerena izay ao anatiny. Ary amin'ny andro ho avy rehefa miatrika ny virus COVID ianao, ny zavatra hivoaka avy ao dia inona avy ny ao anatinao. Ary raha feno fangirifiriana ianao dia hivoaka. Ary raha feno fahasosorana ianao dia hivoaka. Ary raha feno fahatezerana na ahiahy na fanamelohana anao ianao na mahamenatra na tsy fahatokisana dia efa hivoaka. Raha feno tahotra ianao dia na inona na inona ao anaty ao inona no hivoaka rehefa tsindry anao ny fanerena. Ary izany no lazainy eto, manaporofo ny finoako izany olana izany. Fantatrao, taona lasa izay, nihaona tamin'ny lehilahy taloha iray aho nandritra ny fihaonambe taona maro lasa izay niverina tany Atsinanana. Heveriko i Tennessee. Ary izy, io lehilahy antitra io dia nilaza tamiko ny fomba hanafoanana azy no tombony lehibe indrindra teo amin'ny fiainany. Ary hoy aho hoe: "Eny ary, tiako ny mandre ity tantara ity. "Lazao amiko izany rehetra izany." Ary inona ilay asany amin'ny makiazy iray manontolo nandritra ny androm-piainany. Olon-tsoavaly izy nandritra ny androm-piainany. Fa indray andro mandritra ny fihenan'ny toe-karena, niditra tao ny lehibeny ary nanambara tampoka hoe "Voaroaka ianao." Ary ny fahaizany rehetra dia nivoaka ny varavarana. Ary nidina am-bolana niaraka tamin'ny vady izy ary fianakaviana sy tsy manana asa hafa manodidina azy, ary nisy ny resa-bola nitranga tamin'io fotoana io. Ary kivy be izy, ka natahotra. Ny sasany aminareo dia mety mahatsapa toy izany amin'izao fotoana izao. Mety efa nesorina sahady ianao. Angamba matahotra ny ho lasa ianao napetraka nandritra izao krizy izao. Ary tena kivy izy, natahotra. Hoy izy, izaho nanoratra io, hoy izy, "toa nahatsapa hoatr'izany aho "ny tontoloko efa niady tamin'ny andro nahavoaroaka ahy. "Rehefa nody anefa aho dia nolazaiko tamin'ny vadiko ny zava-nitranga. "ary nanontany izy hoe: 'Ka inona izao ataonao izao?' "Ary hoy aho, hatramin'izay nitifitra ahy dia. «Hotanterahiko foana izay efa nokasaiko hatao. "Aoka ianao ho mpanamboatra. "Hapindrako trano ny tranonay "Ary hiditra amin'ny sehatry ny trano aho." Ary hoy izy tamiko: "Fantatrao, ry Rick, ilay ezaka voalohany nataoko "ny fananganana efitrano fandraisam-bahiny roa kely." Izany no nataony. Nefa hoy izy: "Tao anatin'ny dimy taona, olo-tapitrisany aho." Izany lehilahy izany, ilay lehilahy noresahako, no Wallace Johnson, ary ny orinasa natombony rehefa avy nitifitra dia nantsoina hoe Holiday Inns. Holiday Inns. Nilaza tamiko i Wallace, "Rick, anio raha mahazo mahita aho "ilay olona nitifitra ahy, am-pahatsorana aho "misaotra azy noho izay nataony." Tamin'izay fotoana izay dia tsy takatro fa naninona aho no voaroaka, fa maninona no nilevina aho? Fa taoriana kelin'izay dia hitako hoe tsy nino an'Andriamanitra izany ary drafitra mahagaga hahafahako mandroso ahy amin'ny asan'ny safidiny. Manana olana ny olana. Manana tanjona izy ireo. Fantaro fa avy mamokatra izy ireo ary iray amin'ireo zavatra voalohany mamokatra finoana lehibe kokoa izy ireo, andramana ny finoanao. Laharana faharoa, indreto ny tombony faharoa amin'ny olana. Manampy ny fiaretako ny olana. Mampiorina ny fiaretako izy ireo. Izany no ampahany amin'ny andian-teny, hoy izy ireo olana ireo dia lasa mamorona faharetana. Mampitombo faharetana amin'ny fiainanao izy ireo. Inona no vokatry ny olana teo amin'ny fiainanao? Hery maharitra. Ara-bakiteny ny fahaizana miatrika tsindry. Androany dia antsointsika hoe: Ny fahaizana miondrika miverina. Ary iray amin'ireo toetra tsara indrindra tokony hianaran'ny ankizy rehetra ary ny olon-dehibe rehetra tokony hianatra ny hery mihetsika. Satria mianjera daholo ny olona rehetra, mandalo fotoan-tsarotra ny olona rehetra, Marary amin'ny fotoana hafa ny marary rehetra. Ny olona rehetra dia manana lesoka amin'ny fiainany. Ahoana ny fomba iatrehana ny tsindry. Ny fiaretana dia manohy hatrany ary mihantona hatrany. Ahoana, ahoana no hianaranao manao izany? Ahoana no hianaranao miatrika fanerena? Amin'ny alàlan'ny traikefa, io no hany fomba. Tsy mianatra mikarakara tsindry ianao amin'ny boky iray. Tsy hainao ny miatrika fanerena amin'ny seminera. Mianatra miatrika fanerena ianao amin'ny alàlan'ny fanerena. Ary tsy fantatrao izay ao anatinao mandra-pahatongan'ny tena nandehananao. Tamin'ny taona faharoa an'ny fiangonana Saddleback, 1981, Nandalo fotoam-pahaketrahana aho izay isan-kerinandro dia te hametra-pialana aho. Ary te hiala aho isaky ny alahady tolakandro. Nefa, nandia fotoan-tsarotra teo amin'ny fiainako aho. ary na izany aza dia apetrako eo anoloany ny tongotra iray amin'ny maha-Andriamanitra ahy, aza alao aho hanorina fiangonana lehibe, fa Andriamanitra ô, afaho aho amin'ity herinandro ity. Ary tsy ho kivy aho. Faly be aho fa tsy kivy. Saingy faly kokoa aho fa tsy nanary ahy Andriamanitra. Satria fitsapana izany. Ary nandritra io fotoam-pitsapana io dia nahatsapa ara-panahy aho sy ny herinaratra sy ara-pihetseham-po sy ara-tsaina izay nahafahako nandefa bolety isan-karazany taty aoriana ary miatrika fihenjanana be loatra eo imason'ny besinimaro satria nandeha tamin'io taona io aho amin'ny fahasarotana tsy mihetsika, mifanatrika. Fantatrao, i Amerika dia nanana fifankatiavana tamim-pitiavana. Tianay ny fanamorana. Amin'ny andro sy herinandro ho avy amin'ity krizy ity, be dia be ny zavatra tsy manelingelina. Manahirana. Ary inona no hataontsika amin'ny tenantsika rehefa tsy milamina ny zava-drehetra, rehefa tsy mila hitazomana foana rehefa tsy mahatsiaro tena ho tohizana ianao. Fantatrao, ny tanjon'ny triathlon iray na ny tanjon'ny diabe dia tsy momba ny hafainganam-pandeha, haingana faingana eo ianao, izany dia momba ny fiaretana. Vita ve ilay fifaninanana? Ahoana no fiomanana amin'ireo karazan-javatra ireo? Amin'ny alalanao fotsiny. Ka rehefa mivelatra amin'ny andro ho avy ianao, aza manahy momba izany, aza manahy momba izany. Manampy ny fiaretako ny olana. Manana zava-kendrena ny olana, misy dikany ny tanjona. Ny zavatra fahatelo izay nolazain'i Jakoba amintsika momba ireo olana dia ny olana izay mihamalalaka ny toetrako. Ary izy dia milaza izany ao amin'ny andininy efatra amin'ny toko James toko voalohany. Hoy izy nefa avelao ny hitohy mandra-pahatonga anao ho olona manana toetra tsara ary tsy mivadika tsy misy malemy. Tsy te hanana izany ve ianao? Tsy tianao ve ny maheno olona miteny hoe: io vehivavy io dia tsy misy malemy amin'ny toetrany. Io lehilahy io, tsy manana patatra malemy amin'ny toetrany. Ahoana no fomba hahaizanao an'io toetra matotra io? Avelao handeha hatrany ny fizotran'ny raharaha mandra-pahatonganao ho olona lahy sy vavy, manana toetra matotra ary tsy mivadika tsy misy malemy. Fantatrao fa nisy fianarana malaza natao maro, taona maro lasa izay tany Russia izay mahatadidy ny fanoratako, ary teo amin'ny vokatry ny fiainana andavanandro nisy fiantraikany amin'ny halavan'ny lavalava na ny halavan'ny biby samihafa. Ary napetrany ho mora ny fiainana ny biby sasany, ary nataony biby hafa sarotra kokoa sy tontolo henjana. Ary hitan'ny mpahay siansa fa ny biby izay napetraka tao anaty aina ary ny tontolo mora, toe-javatra, ireny fiainana iainana ireny dia nanjary malemy kokoa. Satria mora tokoa ny toe-javatra dia nanjary malemy izy ireo ary mora kokoa amin'ny aretina. Ary ireo izay tao anatin'ny toe-piainana mampiadana dia maty haingana noho ireo navela hahazo traikefa ny zava-tsarotra mahazatra eo amin'ny fiainana. Tsy mahaliana ve izany? Inona no marina amin'ny biby fantatro fa marina ny toetrantsika, koa. Ary amin'ny kolontsaina tandrefana indrindra amin'ny tontolo maoderina, mora be taminay tamin'ny fomba maro izany. Fiainana fivelomana. Tanjona iray nomen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ny mamorona anao tahaka an'i Jesosy Kristy amin'ny toetra. Ny mieritreritra toa an'i Kristy, ny hanao tahaka an'i Kristy, miaina tahaka an'i Kristy, ho tia toa an'i Kristy, ho tsara toa an'i Kristy. Ary raha marina izany, ary miverimberina foana ny Baiboly, dia hitondra anao amin'ny zavatra mitovy ireo Andriamanitra fa nandalo Jesosy mba hampivoatra ny toetranao. Hoy ianao hoe tsara e, inona no tian'i Jesosy? Jesosy dia fitiavana sy fifaliana ary fiadanana sy faharetana ary hatsaram-panahy, ny vokatry ny Fanahy, izany rehetra izany. Ary ahoana no fomba namokaran'Andriamanitra ireo? Amin'ny fametrahana antsika amin'ny toe-javatra mifanohitra. Mianatra faharetana isika rehefa alaim-panahy tsy manam-paharetana. Mianatra fitiavana isika rehefa mametrapetraka olona tsy bizina. Mianatra fifaliana ao afovoan'ny alahelo isika. Mianatra miandry isika ary manana izany faharetana izany rehefa tsy maintsy miandry isika Mianatra hatsaram-panahy isika rehefa alaim-panahy tsy ho tia tena. Amin'ny andro tsy ho ela, dia tena mampihetsi-po tokoa hitady mpihaza ao anaty bunker fotsiny, mody miverina, ary hoy aho hoe, hikarakara anay izahay. Izaho sy ny tenako ary ny fianakaviako, izahay efatra ary tsy ao intsony ary manadino ireo olon-drehetra. Fa hampihena ny fanahinao izany. Raha manomboka mieritreritra momba ny olon-kafa ianao ary manampy ireo izay marefo, ny antitra sy ireo manana toe-javatra preexisting, ary raha manantona ianao, dia hitombo ny fanahinao, hitombo ny fonao, ho lasa olona tsara kokoa ianao tamin'ity faran'ity krizy ity fa tsy tamin'ny voalohany ianao, sa tsy izany? Hitanao, Andriamanitra, raha te hanorina ny toetranao izy afaka mampiasa zavatra roa izy. Afaka mampiasa ny Teniny izy, manova antsika ny fahamarinana, ary afaka mampiasa toe-javatra izy, izay sarotra kokoa. Ankehitriny, aleony Andriamanitra mampiasa ny fomba voalohany, ny Teny. Saingy tsy mihaino ny Teny foana isika, ka mampiasa toe-javatra izy mba hisarihana ny saintsika. Ary izany no sarotra kokoa, nefa matetika no mahomby kokoa. Izao, hoy ianao, eny, tsara, ry Rick, azoko izany, fa miovaova ny olana ary misy dikany ny azy, ary eto izy ireo mba hizaha toetra ny finoako ary izy ireo dia ho karazana isan-karazany, ary tsy tonga izy ireo rehefa maniry aho. Ary afaka mampiasa 'Andriamanitra mba hampivoarana ny toetrako sy hitombo ny fiainako. Ka inona no tokony hataoko? Ao anatin'ny andro vitsivitsy sy amin'ny herinandro ary mety ho volana mialoha rehefa miatrika io krizy coronavirus io isika, Ahoana ny fomba hamaliako ireo olana eo amin'ny fiainako? Ary tsy miresaka momba ny virus fotsiny aho. Miresaka olana izay ho avy aho ivelan'ny asa na ankizy any an-trano na izay zavatra hafa rehetra manelingelina ny fiainana toy ny mahazatra. Ahoana no tokony hamaliako ny olan'ny fiainako? Eny ary, tena manokana i James, Nomeny telo tena azo ampiharina isika, valinteny radikaly ry zareo, fa izy ireo no valiny tsara. Raha ny marina, rehefa miteny aminao aho dia ilay voalohany. handeha ianao, dia mila hitifiriko ahy ianao. Fa misy valiny telo, manomboka amin'ny R. daholo izy ireo. Ny valiny voalohany hoy izy dia rehefa ianao dia mandalo fotoan-tsarotra, mifalia. Mandeha, mandeha ho an'ny ankizy ve ianao? Izany dia toa masochistic. Tsy milaza aho hoe mifaly noho ny olana. Araho aho minitra vitsy monja. Lazainy fa hafaliana madio izany. Raiso toy ny namana ny olana ireo. Ankehitriny, aza diso hevitra aho. Tsy lazainy hoe sandoka io. Tsy miteny izy hoe mitafy tsiky plastika, mody mody fa tsara ny zava-drehetra ary tsy izany, satria tsy izany. Pollyanna, Ilay Orphan Annie kely, ny masoandro hivoaka rahampitso, mety tsy hitranga rahampitso. Tsy milaza izy fa mandà ny zava-misy, na tsia mihitsy. Tsy lazainy hoe masochist izy. Ry zaza, mandalo fanaintainana aho izao. Mankahala ny fanaintainana tahaka ny ataonao Andriamanitra. Oh, mijaly aho, iza? Ary manana an'io complexe martyr io ianao, ary fantatrareo, Manana izany fahatsapana ara-panahy izany fotsiny aho rehefa tsy mahatsiaro ratsy. Tsia, tsia, tsia, tsy tian'Andriamanitra ho maritiora ianao. Tian'Andriamanitra tsy hanananao ianao toe-tsaina mikitika amin'ny fanaintainana. Fantatrao fa tsaroako ny fotoana nandalovako fotoana tena sarotra sy namana niezaka ny ho tsara fanahy ary hoy izy ireo hoe: "Fantatrao, Rick, mamporisiha "satria mety hiharatsy kokoa ny zavatra." Ary fantaro izay, niharatsy izy ireo. Tsy nisy fanampiana anefa izany. Nifaly aho ary niharatsy kokoa. (Chuckles) Ka tsy resaka fisainana Pollyanna sandoka velively izany. Raha mazoto aho, dia hazoto aho. Tsia, tsia, tsia, dia manjary lalina lavitra noho izany. Tsy faly izahay, mihaino, tsy mifaly noho ilay olana. Mifaly izahay amin'ny olana, raha mbola eo am-pitiavana isika, mbola betsaka ny zavatra mifaly. Tsy ny olany akory fa ny zavatra hafa afaka mifaly amin'ny olana isika. Nahoana isika no afaka mifaly na eo aza ilay olana? 'Satria fantatsika fa misy antony ao. Satria fantatsika fa tsy handao antsika mihitsy Andriamanitra. Satria mahafantatra zavatra maro samihafa isika. Fantatsika fa manana tanjona Andriamanitra. Mariho hoy izy fa hevero ho hafaliana madio izany. Asio boribory ny teny hoe diniho. Saintsaino dia midika hoe manao tsinontsinona ny sainao. Nahazo fanitsiana toe-tsaina ianao tsy maintsy eto ianao. Safidinao ve ny mifaly? Ao amin'ny Salamo faha-34 andininy voalohany dia hoy izy Hisaotra ny Tompo aho amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fotoana rehetra. Ary hoy izy fa hataoko. Safidy ny safidinao, fanapahana izany. Fanoloran-tena, safidy. Ankehitriny, handia an'ity volana maro ity ianao na toetra tsara na toetra ratsy. Raha ratsy ny fihetsinao dia aleo ianao maka ny tenanao sy ny olon-drehetra manodidina anao. Fa raha tsara ny fihetsikao, dia safidinao ny mifaly. Hoy ianao, andao hojerena ny lafiny mamirapiratra. Andeha hojerentsika izay zavatra azontsika isaorana an’Andriamanitra. Ary aleo hahatakatra fa na amin'ny ratsy aza Andriamanitra afaka mitondra ny tsara amin'ny ratsy. Ataovy àry ny fanitsiana toe-tsaina. Tsy hihontsona aho amin'ity krizy ity. Mahafinaritra kokoa aho amin'izao krizy izao. Hifidy aho, safidiko ny hifaly. Eny, laharana faharoa, fangatahana faharoa R. Ary izany no angatahin'Andriamanitra fahendrena. Izany no tianao atao isaky ny misy krizy ianao. Maniry anao hangataka fahendrena Andriamanitra. Tamin'ny herinandro lasa, raha nihaino ny hafatry ny herinandro lasa ianao ianao. ary raha tsy nahita an'io ianao dia miverena an-tserasera ary hijery izany hafatra izany amin'ny fanaovana azy io amin'ny lohasahan'ny otrikaretina tsy misy tahotra. Safidinao ny mifaly, nefa izao dia mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ianao. Ary ianao mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ary mivavaka ianao ary mivavaka momba ny olanao ianao. Ny andininy faha-fito no milaza izany ao amin'ny Jakoba iray. Raha amin'ity dingana ity no misy aminareo tsy mahalala ny hihaona misy olana manokana, tsy misy dikanteny amin'ny Phillips io. Raha eo am-panaovana izany dia tsy misy olona mahafantatra ny fomba hihaona ny olana manokana dia tsy maintsy mangataka amin'Andriamanitra irery ianao izay manome fahalalany ho an'ny olona rehetra nefa tsy mahatsiaro tena ho meloka. Ary azonao antoka fa ny fahendrena ilaina homena anao. Nilaza izy ireo hoe nahoana ny zavatra rehetra no hangatahako fahendrena ao anatin'ny olana? Ka ianaranao avy amin'izany. Ka ianaranao avy amin'ilay olana, izany no antony nangatahanao fahendrena. Tena manampy anao raha mijanona tsy manontany hoe maninona, maninona no mitranga, ary manontany hoe: inona no tianao hianarako? Inona no tianao hataoko? Ahoana no fomba hivoizako amin'izany? Ahoana no fomba hahalavorary ny vehivavy? Ahoana no ahafahako lasa lehilahy tsara kokoa noho io krizy io? Eny, voasedra aho. Tsy hanahy ny amin'ny antony aho. Fa maninona no tsy maninona na dia izany aza. Ny zava-dehibe dia ny hoe, inona no hataoko, ary inona no tiako hianarako amin'ity toe-javatra ity? Ary raha te hanao izany ianao dia mila mangataka fahendrena. Ka hoy izy fa rehefa mila fahendrena ianao dia mangataha amin'Andriamanitra, Homen'Andriamanitra anao izany. Ka hoy ianao: Andriamanitra, mila fahendrena toy ny reny aho. Hankany an-trano ny zanako amin'ny volana ho avy. Mila fahendrena aho amin'ny raiko. Ahoana no fomba hitondrako rehefa tsy atahorana ny asantsika ary tsy afaka miasa aho izao? Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra. Aza manontany hoe maninona, fa manontania. Ka mifaly aloha, mahazo toetra tsara ny miteny hoe misaotra an'Andriamanitra tsy noho ny olana aho, fa misaotra an 'Andriamanitra amin zao olana aho. Satria mahasoa Andriamanitra na dia miaina aza ny fiainana. Izany no antony iantsoako an'ity andiany ity "Ny tena finoana izay miasa rehefa tsy miaina ny fiainana." Rehefa tsy mandeha ny fiainana. Ka faly aho ary mangataka. Ny zavatra fahatelo nolazain'i James fa hataony dia miala voly. Eny, mitsangatsangana fotsiny, aza misalasala rehetra ao anaty andian-dra. Aza miady saina be fa tsy afaka manao na inona na inona. Aza manahy momba ny ho avy. Andriamanitra milaza fa hikarakara anao aho, hatoky ahy. Matoky an'Andriamanitra hahalalanao izay tsara indrindra ianao. Miara-miasa aminy ianao. Tsy hainao vetivety ny raharaha atrehanao. Nefa hoy ianao fotsiny, Andriamanitra ô, miala sasatra aho. Tsy misalasala aho. Tsy misalasala aho. Matoky anao aho amin'ity toe-javatra ity. Ny andininy faha-valo no andininy farany hojerentsika. Eny, hijery bebe kokoa ao anatin'ny iray minitra isika. Saingy hoy ny andininy faha-valo fa tsy maintsy mangataka amim-pinoana amim-pahatsorana ianao tsy misy fisalasalana miafina. Inona no tadiavinao amin'ny finoana marina? Mangataha fahendrena. Ary lazao hoe: Andriamanitra, mila fahendrena aho, ary misaotra anao omenao ahy ny fahendrena. Misaotra anao aho, manome fahendrena ahy ianao. Aza misalasala, aza misalasala, fa ento mankany amin'Andriamanitra izany. Fantatrao, hoy ny Baiboly, teo aloha rehefa nanondro aho nilaza ireo karazana olana maro ireo izy. Fantatrao, miresaka momba ny maro an'isa izy ireo, maro, karazan-java-manahirana maro. Io teny io amin'ny teny grika, misy olana marobe, dia teny mitovy amin'izay voasarona ao amin'ny Petera Voalohany toko faha-efatra, andininy faha-efatra izay nilaza Andriamanitra dia manana karazana fahasoavana maro homena anao. Ny karazana fahasoavana maro samihafa avy amin'Andriamanitra. Mitovy ny maro loko, multifeatured, toa diamondra. Inona no lazainy eo? Fa ny olana rehetra anananao, misy fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay misy. Ho an'ny karazana fitsapana sy fahoriana isan-karazany ary ny fahasarotana, misy karazana fahasoavana sy famindram-po ary hery izay tadiavin'Andriamanitra homena anao mba hampifandraisina amin'io olana manokana io. Mila fahasoavana ho an'io ianao, mila fahasoavana ho an'ity, mila fahasoavana ho an'ity ianao. Andriamanitra milaza fa ny fahasoavako dia maro an'isa toy ny olana atrehinao. Ka inona aho no lazaiko? Lazaiko fa ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao, ao anatin'izany krizy COVID izany, ny devoly dia midika faharesena anao amin'ireny olana ireny. Fa Andriamanitra dia te hampivoatra anao amin'ireto olana ireto. Tiany ny handresy anao ry satana, Andriamanitra kosa te-hampivelatra anao. Ankehitriny, ireo olana tonga amin'ny fiainanao aza ataonao ho lasa olona tsara kokoa. Olombelona maro no tonga mangidy avy amin'ny em. Tsy manamboatra anao ho olona tsara kokoa izany. Ny fihetsikao no mahatonga ny fahasamihafana. Ary eo no tiako ho tadidinao aminao. Laharana faha-efatra, ny fahefatra tokony hotsarovana rehefa mandia olana ianao dia ny mahatadidy ny fampanantenan'Andriamanitra. Tsarovy ny teny fikasan'Andriamanitra. Midina ao amin'ny andininy 12 izany. Mamela ahy hamaky anao io fampanantenana io ianao. Jakoba toko voalohany, andininy faha-12. Sambatra izay maharitra amin'ny fitsapana, satria rehefa niatrika ny fitsapana Izy, ary handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nampanantenain'Andriamanitra izy, misy ny teny, ao amin'izay tia azy. Mamelà ahy hamaky azy io indray. Tiako hohenoinao tsara izany. Sambatra izay maharitra amin'ny fitsapana, izay mikarakara ny sarotra, sahala amin'ilay toe-javatra misy antsika amin'izao fotoana izao. Sambatra izay maharitra, izay maharitra! Izay matoky an'Andriamanitra, Izay mino foana mandritra ny fitsapana, satria rehefa niatrika ny fitsapana izy, dia mivoaka ao ambadika, tsy maharitra ity fitsarana ity. Misy ny fiafarany. Hivoaka amin'ny lafiny hafa amin'ny tonelina ianao. Ho azonao ny satroboninahitry ny fiainana. Eny, tsy fantatro daholo izay dikan'izany, fa tsara. Satroboninahitry ny fiainana izay nampanantenain'Andriamanitra ho an'izay tia Azy. Safidinao ny mifaly. Safidinao ny hatoky ny fahendren'Andriamanitra fa tsy misalasala. Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra hanampy anao amin'ny toe-javatra iainanao. Ary avy eo angataho amin'Andriamanitra ny faharetan'ny finoana. Ary lazao hoe: Andriamanitra, tsy miala aho. Dia ho lasa izany. Nisy olona nanontany indray, inona no tianao? andininy ao amin'ny Baiboly? Hoy, tonga izany. Ary nahoana no tianao io andininy io? Satria rehefa tonga ny olana dia fantatro fa tsy nijanona izy ireo. Tonga izy ireo. (Chuckles) Ary marina izany amin'ity toe-javatra manokana ity. Tsy mijanona eo, efa tonga. Ankehitriny, te-hifandray amin'ity eritreritra ity aho. Tsy miteraka olana fotsiny ny krizy. Mampiharihary azy ireo matetika izany, ary matetika izany no mampiharihary azy ireo. Ity krizy ity dia afaka manambara fandrika sasantsasany amin'ny fanambadianareo. Manaporofo krizy ireo krizy ireo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ity krizy ity dia afaka manambara fandrika sasany amin'ny fomba fiainanao, fa sarotra loatra aminao izany. Ary mazotoa mamela Andriamanitra hiresaka aminao inona ny tokony hanovana ny fiainanao, tsy mety? Maniry anao hieritreritra momba ity herinandro ity ianao, ary avelao aho hanome anao dingana vitsivitsy azo atao, sa tsia? Dingana azo ampiharina, isa voalohany, tiako ianao hamporisika olon-kafa hihaino an'io hafatra io. Hanao izany ve ianao? Arotsanao amin'ny namanao ve io rohy io? Raha izany no nampahery anao, ampitao izany, ary mahereza ho anao amin'ity herinandro ity. Mila fampaherezana ny olona rehetra manodidina anao amin'ity krizy ity. Ka alefaso 'rohy io. Roa herinandro lasa izay raha tao am-piangonana tao amin'ny tobinay izahay, tao amin'ny Lake Lake sy ireo mpiambina rehetra an'ny Saddleback, olona tokony ho 30 000 eo ho eo no niseho tao am-piangonana. Saingy tamin'ity herinandro lasa ity izay tsy maintsy manafoana serivisy izahay ary samy tokony nijery an-tserasera daholo, hoy aho, mandeha any amin'ny vondrona madinidinikao ny tsirairay avy ary manasa ireo mpifanila trano aminao ary asao ny namanao ao amin'ny tarika misy anao, nanana 181 000 izahay ISP amin'ny tokantranontsika mifandray amin'ny serivisy. Midika izany fa olona antsasa-tapitrisa angamba nijery ny hafatry ny herinandro lasa teo. Olona iray tapitrisa mahery na mihoatra. Satria, satria nilaza tamin'ny olon-kafa hijery ianao. Ary te hamporisika anao ho vavolombelon'ny vaovao mahafaly aho amin'ity herinandro ity ao amin'ny tontolo izay mila vaovao tsara. Mila mandre izany ny olona. Mandefasa rohy. Mino aho fa afaka mandrisika olona an-tapitrisany amin'ity herinandro ity raha alefa amin'ny hafatra daholo isika rehetra? Laharana faharoa, raha vondrona vitsivitsy ianao, tsy ho azontsika afaka hihaona, farafaharatsiny amin'ity volana ity, izay azo antoka. Ary koa amporisihiko anao hanangana fivoriana virtoaly. Afaka manana vondrona an-tserasera ianao. Ahoana no anaovanao an'izany? Eny, misy vokatra mivoaka ao toa an'i Zoom. Te-hizaha izany ianao, Zoom, maimaim-poana. Ary afaka miditra ao ianao ary miteny amin'ny olona rehetra mba haka Zoom amin'ny telefaona na amin'ny solosain'izy ireo, ary afaka mampifandray olona enina na valo na 10 ianao, ary afaka mahazo ny vondronao amin'ity herinandro ity ianao amin'ny Zoom. Ary mifankahita mifanena ianareo, toy ny Facebook Live, na toa ny sasany amin'ny hafa, fantatrao, inona ny iPhone rehefa mijery ny FaceTime. Eny, tsy afaka manao izany amin'ny vondrona lehibe ianao, nefa afaka manao izany amin'ny olona iray ianao. Ary mifamporisika mifanatrika amin'ny alàlan'ny teknolojia. Manana teknolojia izay tsy nisy izahay ankehitriny. Ka zahao ny Zoom ho an'ny vondrona virtual virtoaly kely. Ary tena eto an-tserasera afaka mahazo fampahalalana vitsivitsy koa ianao. Ny isa telo, raha tsy anaty vondrona vitsivitsy ianao, Hanampy anao hiditra ao anaty vondrona vondrona an-tserasera aho amin'ity herinandro ity. Ny hany azonao atao dia ny mandefa mailaka amiko, PastorRick@saddleback.com. PastorRick @ sad sadback, teny iray, SADDLEBACK, saddleback.com, ary hampifandray anao aho amin'ny vondrona an-tserasera, sa tsy izany? Hamarino tsara raha anisan'ny Eglizy Saddleback ianao hamaky ny pejinao isan'andro isan’andro mandritra izao krizy izao. Antsoina hoe "saddleback ao an-trano". Misy toro-hevitra, nahazo hafatra mampahery, dia nahazo vaovao izay azonao ampiasaina. Zavatra tena azo ampiharina. Te hifandray aminao isan'andro izahay. Makà "Saddleback ao an-trano." Raha tsy manana adiresy mailakao ianao, dia tsy mahazo an'io ianao avy eo. Ary afaka mandefa ny adiresy mailakao amiko ianao amin'ny PastorRick@saddleback.com, ary hataoko ao anaty lisitra ianao, ary ho azonao ny fifandraisana isan'andro, ny gazety "saddleback in the Home". Vao manakaiky fotsiny aho vao mivavaka amin'ny fanambarany hoe tena tiako ianao. Mivavaka aminao isan'andro aho, ary tsy mitsahatra mivavaka ho anao aho. Hifankahita isika. Tsy mbola nifarana teo ny tantara. Mbola eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra, ary hampiasa izany Andriamanitra hampitombo ny finoanao, hitondrana olona amin'ny finoana. Ary iza no mahalala izay hitranga. Azontsika atao ny manana fifohazana ara-panahy amin'izany rehetra izany satria ny olona matetika dia mitodika any amin'Andriamanitra rehefa mandia fotoan-tsarotra izy ireo. Avelao aho hivavaka ho anao. Dada Ray, tiako misaotra ny olona rehetra iza no mihaino izao? Enga anie isika hiaina ny hafatr'i Jakoba toko voalohany, ny andininy enina na fito voalohany. Enga anie isika hianatra fa ho tonga ny olana, hitranga izy ireo, izy ireo dia miovaova, misy tanjona izy ireo ary izany no tianao ampiasao ho tsara amin'ny fiainantsika izy ireo raha matoky anao izahay. Ampio izahay tsy hisalasala. Ampio izahay hifaly, hangataka, Tompo, ary hahatsiaro ny fampanantenanao. Ary mivavaka ho an'ny tsirairay aho fa hanana herinandro salama izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amena. Samy tahian'Andriamanitra daholo ianao. Ampitao amin'ny olon-kafa izany.
&quot;Finoana iray izay misahana olana&quot; miaraka amin&#39;ny pasitera Rick Warren
< start="1.34" dur="1.42"> - Salama, ianareo rehetra, izaho Rick Warren, >
< start="2.76" dur="1.6"> pasitera ao amin'ny fiangonana Saddleback ary mpanoratra >
< start="4.36" dur="2.58"> ny "Ilay tanjon'aina mitondra soa" ary mpiteny >
< start="6.94" dur="2.71"> momba ny fandaharana "Daily Hope". >
< start="9.65" dur="2.53"> Misaotra anao nivezivezy tamin'ity onjam-peo ity. >
< start="12.18" dur="3.59"> Fantatrao, amin'ity herinandro ity eto Orange County, Kalifornia, >
< start="15.77" dur="2.47"> nanambara ny governemanta fa handrara >
< start="18.24" dur="4.19"> ny fivoriana rehetra amin'ny karazany rehetra, na firy >
< start="22.43" dur="1.46"> mandra-pahatapitry ny volana. >
< start="23.89" dur="2.81"> Koa miarahaba anao ao amin'ny Fiangonana Saddleback ao an-trano. >
< start="26.7" dur="1.41"> Faly aho ianao eto. >
< start="28.11" dur="5"> Ary mampianatra anao amin'ny alàlan'ny horonantsary aho >
< start="33.31" dur="4.59"> eo anelanelan'ny ankehitriny ary isaky ny mifarana ity krizy COVID-19 ity. >
< start="37.9" dur="2.12"> Koa miarahaba anao ao amin'ny Fiangonana Saddleback ao an-trano. >
< start="40.02" dur="3.34"> Ary te-hanasa anao hanaraka ahy isan-kerinandro, >
< start="43.36" dur="2.25"> tafiditra ao anatin'ireny fotoam-pivavahana ireny miaraka. >
< start="45.61" dur="2.91"> Hanao mozika sy hivavaka miaraka izahay, >
< start="48.52" dur="2.44"> ary handefa teny avy ao amin'ny Tenin'Andriamanitra aho. >
< start="50.96" dur="3.01"> Fantatrao, araka ny nieritreretako an'izany, >
< start="53.97" dur="2.15"> amin ny fomba voalohany, mila lazaiko aminao aloha. >
< start="56.12" dur="3.84"> Nieritreritra aho fa hanafoana anay ny fihaonana. >
< start="59.96" dur="3.6"> Ary tamin'ity herinandro ity dia nanana ny studio Saddleback aho >
< start="63.56" dur="1.32"> nifindra tany amin'ny garazy nisy ahy. >
< start="64.88" dur="2.34"> Tena ampirimina eto amin'ny garazy aho ity. >
< start="67.22" dur="2.46"> Ilay mpanamory teknolojia. >
< start="69.68" dur="1.979"> Mandrosoa, ry zalahy, manaova veloma ny rehetra. >
< start="71.659" dur="2.101"> (Mihomehy) >
< start="73.76" dur="3.12"> Nanampy izy ireo namindra izany teto ary hametraka izany >
< start="76.88" dur="4.74"> mba hiresahanao aminao isan-kerinandro. >
< start="81.62" dur="3.32"> Ankehitriny, rehefa nieritreritra izay tokony ho tarehinao >
< start="84.94" dur="3.22"> nandritra io krizy COVID-19 io, >
< start="88.16" dur="2.98"> Avy hatrany dia nieritreritra ny bokin'i Jakoba aho. >
< start="91.14" dur="2.67"> Ny bokin'i Jakoba dia boky kely >
< start="93.81" dur="2.15"> manakaiky ny fiafaran'ny Testamenta Vaovao. >
< start="95.96" dur="3.81"> Fa tena azo ampiharina izy io ary tena manampy, >
< start="99.77" dur="5"> ary miantso ity boky ity aho ho finoana izay miasa rehefa tsy misy ny fiainana. >
< start="105.56" dur="3.67"> Ary nieritreritra aho fa raha misy ilaina amin'izao fotoana izao, >
< start="109.23" dur="4.75"> mila finoana izay miasa isika raha tsy tsia ny fiainana. >
< start="113.98" dur="2.86"> Satria tsy mandeha tsara intsony izao. >
< start="116.84" dur="2.75"> Ary izao, amin'ity herinandro ity, hanomboka isika >
< start="119.59" dur="3.25"> dia miaraka hankahery anao >
< start="122.84" dur="1.03"> Amin'izao krizy izao. >
< start="123.87" dur="3.22"> Ary tsy tiako ny tsy ahitan'ireto hafatra ireto. >
< start="127.09" dur="4.1"> Satria ny bokin'i Jakoba dia mirakitra fahitana 14 lehibe >
< start="131.19" dur="4.34"> fananganana andiam-piainana, olana lehibe 14, >
< start="135.53" dur="3.76"> Faritra 14 izay isaky ny anareo >
< start="139.29" dur="1.91"> efa niatrika ny fiainanao, >
< start="141.2" dur="3.17"> ary hiatrika ny ho avy ianao. >
< start="144.37" dur="3.52"> Ohatra, ao amin'ny toko iray amin'i James, >
< start="147.89" dur="1.6"> avelao aho hanome anao topimaso kely momba ilay boky. >
< start="149.49" dur="1.42"> Toko efatra fotsiny izy. >
< start="150.91" dur="2.99"> Toko voalohany, miresaka zava-tsarotra aloha izy. >
< start="153.9" dur="1.77"> Ary hiresaka momba izany isika androany. >
< start="155.67" dur="4.13"> Inona no tanjon'Andriamanitra amin'ny olanao? >
< start="159.8" dur="1.6"> Avy eo dia miresaka ny safidy izany. >
< start="161.4" dur="1.62"> Ahoana no ahaizanao ny sainao? >
< start="163.02" dur="2.085"> Ahoana no ahalalanao hoe rehefa mijanona, oviana no handeha? >
< start="165.105" dur="2.335"> Ahoana no ahalalanao ny tokony hatao, ny fomba handraisanao fanapahan-kevitra? >
< start="167.44" dur="2.41"> Ary avy eo miresaka momba ny fakam-panahy. >
< start="169.85" dur="3.29"> Ary hojerentsika ny fomba handresena ireo fakam-panahy iraisana >
< start="173.14" dur="3.24"> amin'ny fiainanao izay toa tsy mitsahatra mitarika anao tsy mahomby. >
< start="176.38" dur="2.04"> Ary avy eo miresaka momba ny fitarihana izy io. >
< start="178.42" dur="2.68"> Ary miresaka momba ny fomba hahazoantsika fitahian'ny Baiboly izany. >
< start="181.1" dur="2.24"> Tsy vakio fotsiny, fa hitahy azy. >
< start="183.34" dur="1.56"> Ao izany ao amin'ny toko voalohany. >
< start="184.9" dur="2.36"> Ary hojerentsika ireo ao anatin'ny herinandro ho avy. >
< start="187.26" dur="2.7"> Ny toko roa dia miresaka momba ny fifandraisana. >
< start="189.96" dur="3.06"> Hojerentsika ny fomba hitondranao tsara ny olona. >
< start="193.02" dur="2.628"> Ary miaraka amin'ny olona tsy maintsy mijanona ao an-trano, >
< start="195.648" dur="4.242"> ao daholo ny fianakaviana, ny zaza sy ny reny ary ny dada >
< start="199.89" dur="2.32"> ary ny olona dia miraikitra amin'ny haratony tsirairay avy. >
< start="202.21" dur="2.74"> Izany no ho hafatra lehibe amin'ny fifandraisana. >
< start="204.95" dur="1.39"> Avy eo dia miresaka momba ny finoana izany. >
< start="206.34" dur="4.76"> Ahoana no tena itokisanao an'Andriamanitra rehefa tsy tianao izany? >
< start="211.1" dur="2.18"> ary rehefa mandeha ny zavatra mandeha? >
< start="213.28" dur="1.64"> Ao izany ao amin'ny toko faharoa. >
< start="214.92" dur="3.32"> Toko telo, hiresaka resaka isika. >
< start="218.24" dur="1.66"> Ny herin'ny resaka. >
< start="219.9" dur="2.12"> Ary izany no iray amin'ireo andalan-tsoratra lehibe indrindra >
< start="222.02" dur="3.73"> ao amin'ny Baiboly ny fomba fitantanan'ny vavanao. >
< start="225.75" dur="2.25"> Izay no zava-dehibe na anaty krizy isika na tsia. >
< start="228" dur="2.27"> Ary avy eo miresaka momba ny fisakaiza izy io. >
< start="230.27" dur="2.21"> Ary manome fampahalalana tena azo ampiharina amintsika izany >
< start="232.48" dur="2.71"> amin'ny fomba ahoana no hampiorenanao namana tsara >
< start="235.19" dur="2.7"> ary aza manalavitra namana. >
< start="237.89" dur="2.24"> Toko telo izany. >
< start="240.13" dur="3.5"> Ny fizarana faha-efatra dia mifanohitra. >
< start="243.63" dur="2.39"> Ary ao amin'ny toko faha-efatra dia miresaka isika >
< start="246.02" dur="1.88"> ahoana no hialanao amin'ny fifamaliana. >
< start="247.9" dur="1.56"> Ary tena hanampy anao izany. >
< start="249.46" dur="2.78"> Rehefa mitombo ny fifanolanana ary mitombo ny fahasosorana. >
< start="252.24" dur="2.94"> rehefa tsy miasa ny olona, ​​ahoana ny fomba hisorohana ny fifamaliana? >
< start="255.18" dur="2.03"> Ary avy eo miresaka momba ny fitsarana ny hafa. >
< start="257.21" dur="2.74"> Ahoana no hialanao amin'ny filalaovana an'Andriamanitra? >
< start="259.95" dur="1.84"> Mety hiteraka fandriampahalemana be eo amin'ny fiainantsika izany >
< start="261.79" dur="1.08"> raha afaka manao izany isika >
< start="262.87" dur="1.67"> Ary avy eo miresaka momba ny ho avy. >
< start="264.54" dur="1.82"> Ahoana ny fomba hanoratanao ny ho avy? >
< start="266.36" dur="1.56"> Izay no ao amin'ny toko faha-efatra. >
< start="267.92" dur="2.75"> Ankehitriny, efa nolazaiko tao amin'ny toko farany, toko faha-dimy >
< start="270.67" dur="0.98"> nisy toko efatra, misy raha ny marina >
< start="271.65" dur="1.683"> dimy toko ao amin'ny Jakoba. >
< start="274.327" dur="2.243"> Hiresaka momba ny vola isika. >
< start="276.57" dur="3.65"> Ary miresaka momba ny hoe tokony ho hendry amin'ny harenao izy. >
< start="280.22" dur="1.73"> Ary avy eo isika dia mandinika faharetana. >
< start="281.95" dur="3.26"> Inona no ataonao rehefa miandry an'Andriamanitra ianao? >
< start="285.21" dur="1.92"> Ny efi-trano sarotra indrindra >
< start="287.13" dur="3.87"> dia ao amin'ny efitrano fiandrasana rehefa maika ianao fa tsy Andriamanitra. >
< start="291" dur="1.29"> Ary avy eo isika hijery ny vavaka, >
< start="292.29" dur="2.07"> izay ny hafatra farany hojerentsika. >
< start="294.36" dur="1.94"> Ahoana no hivavahanao ireo olanao? >
< start="296.3" dur="2.58"> Ny Baiboly milaza fa misy ny fomba hivavaka sy hahazoana valiny, >
< start="298.88" dur="2.29"> ary misy fomba iray tsy tokony hivavahana. >
< start="301.17" dur="1.27"> Ary hojerentsika ny momba izany. >
< start="302.44" dur="3.763"> Ankehitriny, hitantsika hijery ireo andininy enina voalohany >
< start="306.203" dur="2.072"> amin'ny bokin'i Jakoba. >
< start="308.275" dur="5"> Raha tsy manana Baiboly ianao, dia tiako ianao ny maka >
< start="313.46" dur="3.73"> ivelan'ity tranokala ity, ny drafitra fampianarana, >
< start="317.19" dur="2.02"> satria ny andininy rehetra no hojerentsika >
< start="319.21" dur="2.04"> eo amin'ny drafitrao ve ianao? >
< start="321.25" dur="3.22"> Jakoba toko voalohany, ireo andininy enina voalohany. >
< start="324.47" dur="4.07"> Ary ny Baiboly no milaza izany rehefa miresaka io >
< start="328.54" dur="2.33"> miatrika ireo olanao. >
< start="330.87" dur="2.35"> Voalohany, ny Jakoba 1: 1 no miteny an'io. >
< start="333.22" dur="5"> Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo >
< start="338.86" dur="4.18"> amin'ny foko 12 miparitaka any amin'ireo firenena, arahabaina. >
< start="343.04" dur="2.23"> Ankehitriny, avelao aho hiato kely mandritra ny iray minitra ary hiteny >
< start="345.27" dur="2.95"> ity no fampidiran-dresaka indrindra >
< start="348.22" dur="1.71"> amin'ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly. >
< start="349.93" dur="2.01"> Satria fantatrao hoe iza i James? >
< start="351.94" dur="3.073"> Zanakalahin'i Jesosy izy. >
< start="355.013" dur="1.507"> Inona no tianao holazaina? >
< start="356.52" dur="2.19"> Midika izany fa zanak’i Maria sy Josefa izy. >
< start="358.71" dur="2.899"> Zanak’i Maria irery i Jesosy. >
< start="361.609" dur="4.591"> Tsy zanak'i Josefa izy fa rain'i Jesosy Andriamanitra. >
< start="366.2" dur="2.47"> Fa ny Baiboly milaza amintsika fa i Maria sy i Josefa >
< start="368.67" dur="3.52"> Nanana zanaka maro taty aoriana, ary nanome antsika ny anarany mihitsy aza. >
< start="372.19" dur="2.87"> Tsy kristiana i James. >
< start="375.06" dur="2.27"> Tsy mpanara-dia an'i Kristy izy. >
< start="377.33" dur="3.54"> Tsy nino izy fa ny rahalahin'ny rahalahiny dia ny Mesia >
< start="380.87" dur="1.78"> nandritra ny ministeran'i Jesôsy manontolo. >
< start="382.65" dur="1.29"> Natoky tena izy. >
< start="383.94" dur="3.14"> Ary mety hoheverinao izany, zandriny izay tsy mino >
< start="387.08" dur="3.22"> amin'ny zokiolona iray, tsara izany, dia ho tsotra. >
< start="390.3" dur="3.81"> Inona no nahatonga an'i Jakoba hino an'i Jesosy Kristy? >
< start="394.11" dur="1.56"> Ny Fitsanganana amin'ny maty. >
< start="395.67" dur="4.42"> Rehefa niverina tamin'ny maty Jesosy dia nandehandeha >
< start="400.09" dur="1.96"> nandritra ny 40 andro sisa dia nahita azy i James. >
< start="402.05" dur="3.79"> tonga mpino izy ary lasa mpitarika >
< start="405.84" dur="2.09"> tao amin'ny Fiangonan'i Jerosalema. >
< start="407.93" dur="3.82"> Ka raha misy manan-jo handatsaka anarana, dia io lehilahy io. >
< start="411.75" dur="4.06"> Afaka nilaza izy, ry James, ilay bandy niara-lehibe tamin'i Jesosy. >
< start="415.81" dur="2.95"> Jakoba, antsasaky ny rahalahin'i Jesosy. >
< start="418.76" dur="3.87"> Jakoba, ilay sakaizan'i Jesosy izay lehibe tokoa. >
< start="422.63" dur="1.47"> Ireo zavatra ireo, nefa tsy. >
< start="424.1" dur="2.68"> Nilaza tsotra fotsiny i James, mpanompon'Andriamanitra. >
< start="426.78" dur="4.97"> Tsy misintona laharana izy, tsy mampiroborobo ny maha-izy azy. >
< start="431.75" dur="2.24"> Fa teo amin'ny andininy roa kosa dia nanomboka niditra izy >
< start="433.99" dur="5"> io resaka voalohany momba ny fikasan'Andriamanitra io amin'ny olanao. >
< start="439.07" dur="1.86"> Mamelà ahy hamaky izany aminao. >
< start="440.93" dur="2.41"> Hoy izy, rehefa ny fitsapana isan-karazany >
< start="444.2" dur="5"> tafahoatra amin'ny fiainanao, aza tezitra amin'izy ireo ho toy ny mpanao an-keriny >
< start="449.52" dur="3.15"> fa arahabaina ry zareo ho namana. >
< start="452.67" dur="2.82"> Fantaro fa ho avy hizaha toetra ny finoanao izy ireo, >
< start="455.49" dur="4.8"> ary mamokatra ao aminao ny hatsaran'ny fiaretana. >
< start="460.29" dur="4.32"> Fa avelao hitohy izany fizahana izany mandra-paharetana izany >
< start="464.61" dur="5"> dia mivoatra tanteraka, dia ho lasa olona ianao >
< start="470.01" dur="5"> amin'ny toetra matotra sy ny fahatokiana >
< start="475.11" dur="2.71"> tsy misy faritra malemy. >
< start="477.82" dur="2.24"> Izany no dikanteny Phillips >
< start="480.06" dur="2.73"> ao amin'ny Jakoba toko voalohany, andininy roa ka hatramin'ny enina. >
< start="482.79" dur="3.377"> Ankehitriny, hoy izy rehefa tonga amin'ny fiainanao ny karazana fitsapana rehetra >
< start="486.167" dur="2.963"> ary mitobaka eo amin'ny fiainanao izy ireo, hoy izy, aza tezitra aminy >
< start="489.13" dur="1.69"> amin'ny maha-mpaka an-keriny azy dia tongasoa azy ho namana. >
< start="490.82" dur="2.57"> Hoy izy, manana olana ianao, mifalia. >
< start="493.39" dur="2.09"> Nanana olana ianao, mifalia. >
< start="495.48" dur="1.807"> Nanana olana ianao, mitsiky. >
< start="499.51" dur="0.87"> Ankehitriny, fantatro ny hevitrao. >
< start="500.38" dur="1.94"> Mandeha ianao, kinanjo ve ianao? >
< start="502.32" dur="3.15"> Nahoana aho no tokony ho faly momba ny COVID-19? >
< start="505.47" dur="5"> Maninona aho no mandray ireo fitsapana ireo eo amin'ny fiainako? >
< start="510.6" dur="2.31"> Ahoana no mety hitranga? >
< start="512.91" dur="3.74"> Ny fanalahidin'ny an'io toetra io amin'ny fitazonana hatrany >
< start="516.65" dur="2.85"> toe-tsaina tsara ao anatin'ny krizy >
< start="519.5" dur="3.65"> ny teny mahatsapa, ny teny tonga saina. >
< start="523.15" dur="2.19"> Hoy izy, rehefa ireo karazana fitsapana rehetra ireo >
< start="525.34" dur="2.99"> tafahoatra amin'ny fiainanao, aza tezitra amin'izy ireo ho toy ny mpanao an-keriny >
< start="528.33" dur="4.89"> fa raiso ny maha-namana azy, ary fantaro, fantaro, >
< start="533.22" dur="3.75"> tonga izy ireo mba hizaha toetra ny finoanao. >
< start="536.97" dur="3.839"> Ary avy eo izy dia manohy, inona no vokariny eo amin'ny fiainany. >
< start="540.809" dur="5"> Ny noteneniny eto dia ny fahombiazanao hitantana anao >
< start="545.99" dur="4.44"> ny herinandro izay eo alohanay ao amin'ity aretina ity COVID-19 >
< start="550.43" dur="2.87"> izao dia manerana an'izao tontolo izao, ary mihamaro hatrany >
< start="553.3" dur="3.11"> Mihidy ny firenena, ary mihidy izy ireo >
< start="556.41" dur="2.31"> trano fisakafoanana ary manidy fivarotana izy ireo, >
< start="558.72" dur="1.89"> ary manidy sekoly izy ireo, >
< start="560.61" dur="1.57"> ary manidy fiangonana izy ireo, >
< start="562.18" dur="1.69"> ary manidy toerana rehetra izy ireo >
< start="563.87" dur="3.86"> izay mivory olona, ​​ary toy ny eto Orange County, >
< start="567.73" dur="4.29"> izay tsy avela hihaona amin'iza amin'ity volana ity. >
< start="572.02" dur="3.75"> Hoy izy, ny fahombiazanao hiatrehana ireo olana ireo >
< start="575.77" dur="3.49"> dia ho tapa-kevitra amin'ny fahalalanao. >
< start="579.26" dur="1.3"> Ny fahalalanao. >
< start="580.56" dur="3.24"> Ary amin'ny fihetsikao amin'ireo olana ireo. >
< start="583.8" dur="3.69"> Izay no tsapanao, io no fantatrao. >
< start="587.49" dur="3.79"> Izao, ny zavatra voalohany amin'ity andalana ity dia tiako ho tsapanao >
< start="591.28" dur="3.957"> dia Andriamanitra no manome fampahatsiahivana efatra momba ny olana. >
< start="595.237" dur="2.253"> Azonao atao ny manoratra ireo. >
< start="597.49" dur="2.07"> Fahatsiarovana efatra momba ny olana eo amin'ny fiainanao, >
< start="599.56" dur="2.35"> izay ahitana ny krizy izay hatrehantsika izao. >
< start="601.91" dur="5"> Laharana voalohany, hoy izy voalohany, fa tsy azo ihodivirana ny olana. >
< start="607.42" dur="2.34"> Tsy azo ihodivirana ny olana. >
< start="609.76" dur="1.04"> Izao izy, ahoana no fomba ilazany izany? >
< start="610.8" dur="4.33"> Nilaza izy fa rehefa tonga ny karazana fitsapana rehetra. >
< start="615.13" dur="4.41"> Tsy miteny izy raha tonga ny karazana fitsapana rehetra, hoy izy hoe rahoviana. >
< start="619.54" dur="1.72"> Azonao atao ny miantehitra amin'izany. >
< start="621.26" dur="3.27"> Tsy ity lanitra ity izay lavorary ny zava-drehetra. >
< start="624.53" dur="2.66"> Ity no Tany izay potika ny zava-drehetra. >
< start="627.19" dur="2.05"> Ary milaza izy fa hanana olana ianao, >
< start="629.24" dur="3.44"> hanana sarotra ianao, afaka manantena azy io, >
< start="632.68" dur="2.37"> afaka mividy stock ao anatiny ianao. >
< start="635.05" dur="2.99"> Ankehitriny, tsy zavatra nolazain'i James irery izany. >
< start="638.04" dur="1.62"> Hita ao amin'ny Baiboly daholo izany. >
< start="639.66" dur="2.77"> Nilaza i Jesosy eo amin'izao tontolo izao dia hanana fitsapana ianao >
< start="642.43" dur="3.68"> ary fakam-panahy, ary hahazo fahoriana ianareo. >
< start="646.11" dur="2.29"> Nilaza izy fa hanana olana eo amin'ny fiainana. >
< start="648.4" dur="3.07"> Koa nahoana no talanjona isika rehefa manana olana? >
< start="651.47" dur="1.632"> Nilaza i Peter fa aza gaga >
< start="653.102" dur="2.558"> rehefa mandalo fisedrana mirehitra. >
< start="655.66" dur="1.786"> Nilaza fa aza manao zavatra vaovao. >
< start="657.446" dur="2.744"> Mandalo fotoan-tsarotra ny olon-drehetra. >
< start="660.19" dur="2.04"> Sarotra ny fiainana. >
< start="662.23" dur="2.53"> Tsy lanitra izany, ity dia Tany. >
< start="664.76" dur="3.18"> Tsy misy olona hiaro tena, tsy misy mitokana >
< start="667.94" dur="2.94"> tsy nisy niniana, tsy nisy nanilika olona. >
< start="670.88" dur="1.73"> Nilaza izy fa hanana olana ianao >
< start="672.61" dur="2.78"> satria tsy azo ihodivirana. >
< start="675.39" dur="3.84"> Fantatrao, tadidiko indray mandeha aho fony tany amin'ny oniversite. >
< start="679.23" dur="2.27"> Taona maro lasa izay dia nandalo aho >
< start="681.5" dur="1.71"> tena sarotra. >
< start="683.21" dur="3.09"> Ary nanomboka nivavaka aho, dia hoy aho: "Andriamanitra, omeo faharetana aho." >
< start="686.3" dur="2.91"> Ary raha tokony hihatsara ny fitsapana dia miharatsy hatrany hatrany. >
< start="689.21" dur="2.22"> Dia hoy aho hoe: "Andriamanitra dia tena mila faharetana" >
< start="691.43" dur="1.72"> ary niharatsy ny olana. >
< start="693.15" dur="2.43"> Dia hoy aho hoe: "Andriamanitra dia tena mila faharetana" >
< start="695.58" dur="2.93"> ary miharatsy hatrany koa izy ireo. >
< start="698.51" dur="1.77"> Inona no nitranga? >
< start="700.28" dur="1.82"> Eny, tsapako ihany fa rehefa afaka enim-bolana teo ho eo, >
< start="702.1" dur="2.64"> Manam-paharetana be lavitra noho ny tamin'ny nanombohako aho, >
< start="704.74" dur="2.07"> fa ny fomba nampianarin'Andriamanitra ahy faharetana >
< start="706.81" dur="3.2"> dia tao anatin'ireo zava-tsarotra ireo. >
< start="710.01" dur="2.85"> Ankehitriny, ireo olana dia tsy karazana fampianarana voafidy >
< start="712.86" dur="2.44"> manana safidy ianao raisinao amin'ny fiainana. >
< start="715.3" dur="2.863"> Tsia, takiana izy ireo, tsy afaka misafidy azy ireo ianao. >
< start="719.01" dur="3.71"> Mba hahazoana diplaoma amin'ny sekolin'ny fiainana, >
< start="722.72" dur="1.96"> dia mandia ny sekolin'ny kapoka mafy ianao. >
< start="724.68" dur="2.87"> Handalo olana ianao, tsy azo ihodivirana izy ireo. >
< start="727.55" dur="1.35"> Izany no lazain'ny Baiboly. >
< start="728.9" dur="2.43"> Faharoa, izany no lazain'ny Baiboly momba ny olana. >
< start="731.33" dur="3.923"> Miovaova ny olana, izany dia tsy mitovy daholo. >
< start="735.253" dur="2.817"> Tsy mahazo olana mitovy ianareo. >
< start="738.07" dur="1.89"> Mahazo ireo be dia be hafa. >
< start="739.96" dur="2.11"> Tsy vitan'ny hoe mahazo fotsiny ianao fa mahazo hafa. >
< start="742.07" dur="5"> Hoy izy rehefa iharam-pitsapana ianao, rehefa manana olana amin'ny karazany maro ianao. >
< start="748.25" dur="2.09"> Azonao atao ny manao fehezanteny hoe raha manamarika ianao. >
< start="750.34" dur="3.54"> Rehefa tonga amin'ny fiainanao ny karazana fitsapana rehetra. >
< start="753.88" dur="3.25"> Fantatrao fa zaridaina aho ary indray mandeha no nianatra. >
< start="757.13" dur="2.32"> ary hitako fa ny fanjakana eto >
< start="759.45" dur="2.18"> tany Etazonia no nanasokajiana azy >
< start="761.63" dur="3.493"> Karazan-tsimparifary 205 isan-karazany. >
< start="765.123" dur="4.767"> Mino aho fa mitombo ny 80% amin'izy ireo ao amin'ny zaridainako. (Mihomehy) >
< start="769.89" dur="2.52"> Matetika aho no mieritreritra fa rehefa mihinana legioma aho. >
< start="772.41" dur="2.85"> Tokony handoa ny fidirana any amin'ny fiompiana ahitra i Warren. >
< start="775.26" dur="3.62"> Fa misy karazana tsimparifary maro, >
< start="778.88" dur="1.82"> ary maro ny fitsapana, >
< start="780.7" dur="1.76"> marobe fa misy ny olana. >
< start="782.46" dur="2.282"> Tonga amin'ny habe rehetra izy ireo, tonga amin'ny endriny rehetra. >
< start="784.742" dur="2.898"> Misy tsirony 31 mahery. >
< start="787.64" dur="2.75"> Io teny io eto dia ny karazany rehetra, izay misy io voalaza io >
< start="790.39" dur="1.55"> misy karazana fitsapana amin'ny fiainanao, >
< start="791.94" dur="4.26"> raha ny marina amin'ny teny grika dia midika hoe maro be. >
< start="796.2" dur="2.795"> Raha lazaina amin'ny teny hafa, misy alokaloka be dia be >
< start="798.995" dur="2.205"> amin'ny fiainanao, hanaiky izany ve ianao? >
< start="801.2" dur="1.9"> Maro ny alokaloka miady saina. >
< start="803.1" dur="1.62"> Tsy mitovy ny fijerin'izy ireo. >
< start="804.72" dur="2.67"> Misy olana ara-bola, misy fihenjanan-tsaina >
< start="807.39" dur="2.37"> misy adin-tsaina, misy adin-tsaina, >
< start="809.76" dur="1.62"> misy adin-tsaina. >
< start="811.38" dur="5"> Nilaza izy fa samy hafa ny loko rehetra. >
< start="816.41" dur="2.82"> Fa raha mivoaka sy mividy fiara ianao dia maniry >
< start="819.23" dur="3.44"> loko namboarina, dia mila miandry azy ianao. >
< start="822.67" dur="2.98"> Ary rehefa vita, dia azonao ny lokanao mahazatra. >
< start="825.65" dur="2.01"> Izany no tena teny izay nampiasaina teto. >
< start="827.66" dur="4.99"> Fomba mahazatra sy fitsapana maro samihafa eo amin'ny fiainanao izany. >
< start="832.65" dur="2.14"> Avelan’Andriamanitra hanana antony izy ireo. >
< start="834.79" dur="3.07"> Ny sasany amin'ireo olanao dia tena namboarina manokana. >
< start="837.86" dur="1.842"> Ny sasany tamin'izy ireo dia samy niara-niaina taminay rehetra, >
< start="839.702" dur="2.908"> tahaka io, COVID-19. >
< start="842.61" dur="1.95"> Saingy miteny izy fa miovaova ny olana. >
< start="844.56" dur="2.845"> Ary ny tiako holazaina dia samy hafa ny hamafiny. >
< start="847.405" dur="3.143"> Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mafy ny nahatongavan'izy ireo. >
< start="850.548" dur="3.792"> Miovaova matetika izy ireo, ary izany dia hafiriana. >
< start="854.34" dur="1.421"> Tsy fantatsika hoe rahoviana no haharitra izany. >
< start="855.761" dur="2.699"> Tsy haintsika ny fomba mahomby. >
< start="858.46" dur="2.197"> Nahita famantarana aho ny andro iray izay nilaza hoe, >
< start="860.657" dur="3.98"> "Hilatsaka ny ranonorana amin'ny fiainana rehetra. >
< start="864.637" dur="2.743"> "fa mampihomehy izany." (Mihomehy) >
< start="867.38" dur="1.9"> Ary ataoko fa izany no fomba >
< start="869.28" dur="1.77"> Betsaka ny olona mahatsapa dieny izao. >
< start="871.05" dur="1.92"> Fihomehezana izany. >
< start="872.97" dur="3.07"> Tsy azo ihodivirana ny olana ary miovaova. >
< start="876.04" dur="2.86"> Ny zavatra fahatelo nolazain'i James mba tsy ho gaga isika >
< start="878.9" dur="2.87"> ny olana dia tsy ampoizina. >
< start="881.77" dur="1.6"> Tsy hay tsy ampoizina izy ireo. >
< start="883.37" dur="4.01"> Hoy izy rehefa mivory eo amin'ny fiainanao ny fitsapana, >
< start="887.38" dur="2.05"> raha mandray tsikera ianao, afatory io fehezanteny io. >
< start="889.43" dur="3.13"> Izy ireo dia mirotsaka ao amin'ny fiainanao. >
< start="892.56" dur="3.28"> Jereo, tsy misy olana mitranga rehefa mila izany ianao >
< start="895.84" dur="1.6"> na rehefa tsy mila izany ianao. >
< start="897.44" dur="1.97"> Tonga tokoa izy rehefa te ho avy. >
< start="899.41" dur="1.97"> Izay no ampahany amin'ny antony mahatonga azy io olana. >
< start="901.38" dur="3.05"> Ny olana dia tonga amin'ny fotoana tsy ampoizina indrindra. >
< start="904.43" dur="1.582"> Efa nahatsapa olana toy izany ve ianao >
< start="906.012" dur="2.778"> tonga teo amin'ny fiainanao, ianao mandeha, tsy izao. >
< start="908.79" dur="2.51"> Tena toy ny ankehitriny? >
< start="911.3" dur="3.82"> Eto amin'ny Saddleback Church, dia nanao fampielezan-kevitra lehibe izahay >
< start="915.12" dur="2.45"> manonofy momba ny ho avy. >
< start="917.57" dur="3.27"> Ary tampoka teo dia nandona ny koronavirus. >
< start="920.84" dur="2.06"> Ary handeha aho izao. >
< start="922.9" dur="1.673"> (akoho) Tsy izao. >
< start="926.75" dur="3.073"> Efa nanao kodiarana matevina ve ianao rehefa tara? >
< start="931.729" dur="2.361"> Tsy mahazo kodiarana matevina ianao rehefa be fotoana. >
< start="934.09" dur="1.823"> Maika ianao hamonjy toerana. >
< start="937.12" dur="4.08"> Toy ny zazakely mitafy ny lambanao vaovao >
< start="941.2" dur="4.952"> eny am-pandehanana mandritra ny fiaraha-mientana lehibe amin'ny takariva. >
< start="946.152" dur="2.918"> Na nosarahinao ilay pataloha alohan'ny hitenenana. >
< start="949.07" dur="2.55"> Nitranga tamiko izany indray mandeha >
< start="951.62" dur="1.713"> tamin'ny alahady lasa izay. >
< start="956" dur="4.64"> Misy olona tsy manam-paharetana, >
< start="960.64" dur="1.77"> tsy afaka miandry varavarana mihodina izy ireo. >
< start="962.41" dur="1.72"> Manana fotsiny izy ireo, dia tokony hataony ihany, >
< start="964.13" dur="2.38"> tsy maintsy manao izany izy ireo izao, tokony hataon'izy ireo izao. >
< start="966.51" dur="3.99"> Tadidiko taona maro lasa izay fa tany Japon aho, >
< start="970.5" dur="3.34"> ary nijanona teo amin'ny arabe iray niandry ny gara aho >
< start="973.84" dur="2.55"> ho tonga, ary rehefa hisokatra dia nivoha ny varavarana. >
< start="976.39" dur="3.33"> ary nisy tovolahy Japoney iray avy hatrany >
< start="979.72" dur="4.49"> nandoa ahy ny projectile raha nijoro tao aho. >
< start="984.21" dur="5"> Ary nieritreritra aho, nahoana aho, nahoana izao? >
< start="989.9" dur="3.583"> Izy ireo dia tsy azo inoana, tonga izy ireo rehefa tsy mila 'em. >
< start="994.47" dur="2.94"> Tsy fahita firy no maminavina ny olana eo amin'ny fiainanao. >
< start="997.41" dur="3.69"> Ankehitriny mariho, hoy izy rehefa miatrika fitsapana isan-karazany, rehefa, >
< start="1001.1" dur="3"> tsy azo ihodivirana, karazany daholo, miovaova izy ireo, >
< start="1004.1" dur="3.98"> olona maro eo amin'ny fiainanao, izany no tsy ampoizina, >
< start="1008.08" dur="3.213"> Nilaza izy fa aza tezitra amin'izy ireo tahaka ny mpaka an-keriny. >
< start="1012.19" dur="1.01"> Inona no lazainy eto? >
< start="1013.2" dur="2.16"> Eny, hazavaiko amin'ny antsipiriany io. >
< start="1015.36" dur="2.6"> Fa izao no zavatra fahefatry ny Baiboly momba ny olana. >
< start="1017.96" dur="2.553"> Manana olana ny olana. >
< start="1021.4" dur="2.69"> Manana olana ny olana. >
< start="1024.09" dur="3.07"> Manana tanjona amin'ny zava-drehetra Andriamanitra. >
< start="1027.16" dur="2.72"> Na ny zava-dratsy mitranga eo amin'ny fiainantsika aza, >
< start="1029.88" dur="2.16"> Mahavita zavatra tsara avy amin'izy ireo Andriamanitra. >
< start="1032.04" dur="1.64"> Andriamanitra dia tsy mila mahatonga ny olana rehetra. >
< start="1033.68" dur="2.62"> Ny ankamaroan'ny olana mahatonga antsika manokana. >
< start="1036.3" dur="2.1"> Milaza ny olona, ​​fa maninona no marary ny olona? >
< start="1038.4" dur="3.69"> Eny, ny antony iray dia ny tsy anaovantsika izay lazain'Andriamanitra hataontsika. >
< start="1042.09" dur="3.02"> Raha nihinana izay nasain'Andriamanitra nohaninay isika, >
< start="1045.11" dur="2.71"> raha natory toa an'i Andriamanitra isika, mba hahita fitsaharana. >
< start="1047.82" dur="3.28"> raha manao izay takian'Andriamanitra isika hampihatra. >
< start="1051.1" dur="3.16"> raha tsy navelanay hitarika ny fiainantsika ny fihetseham-po ratsy >
< start="1054.26" dur="2.06"> sahala amin'ny lazain'Andriamanitra, raha mankatò an'Andriamanitra isika, >
< start="1056.32" dur="2.65"> tsy hanana ny ankamaroan'ny olanay izahay. >
< start="1058.97" dur="3.07"> Ny fandinihana natao dia naneho fa manodidina ny 80% amin'ny olana ara-pahasalamana >
< start="1062.04" dur="3.57"> amin'ity firenena ity, any Amerika, dia vokatry ny antsoina >
< start="1065.61" dur="3"> safidin'ny fomba fiaina mitaiza. >
< start="1068.61" dur="3.05"> Amin'ny teny hafa, tsy manao ny tsara fotsiny isika. >
< start="1071.66" dur="1.14"> Tsy ataonay ny zavatra mahasalama. >
< start="1072.8" dur="2.66"> Matetika isika no manao manimba-tena. >
< start="1075.46" dur="2.58"> Fa izay lazainy eto dia misy tanjona ny olana. >
< start="1078.04" dur="3.53"> Hoy izy rehefa sendra olana ianao, >
< start="1081.57" dur="3.46"> mahatsapa fa tonga hamokatra izy ireo. >
< start="1085.03" dur="3.56"> Asio fehezanteny izany, tonga hamokatra izy ireo. >
< start="1088.59" dur="3.22"> Mety hahomby ny olana. >
< start="1091.81" dur="2.23"> Ankehitriny, tsy mandeha mahomby izy ireo. >
< start="1094.04" dur="3.06"> Io virus virus COVID io, raha tsy mamaly amin'ny andro mety aho. >
< start="1097.1" dur="3.35"> tsy hamokatra zavatra lehibe eo amin'ny fiainako izany. >
< start="1100.45" dur="2.17"> Fa raha mamaly amin'ny fomba mety aho. >
< start="1102.62" dur="2.25"> na dia ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fiainako aza >
< start="1104.87" dur="3.89"> afaka mamokatra sy mahazo tombony ary fitahiana, >
< start="1108.76" dur="2.23"> amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainako. >
< start="1110.99" dur="2.26"> Tonga hamokatra izy ireo. >
< start="1113.25" dur="4.59"> Izy dia milaza eto fa ny mijaly sy ny adin-tsaina >
< start="1117.84" dur="5"> ary ny alahelo, eny, ary na dia ny aretina aza dia mahavita zavatra iray >
< start="1123.42" dur="2.913"> mahasoa raha avelantsika izy. >
< start="1127.363" dur="3.887"> Ao amin'ny safidintsika rehetra izany, ao anatin'ny fihetsintsika. >
< start="1131.25" dur="4.043"> Mampiasa ny fahasahiranana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. >
< start="1136.9" dur="2.33"> Hoy ianao nefa dia ahoana no fomba anaovany an'izany? >
< start="1139.23" dur="4.04"> Ahoana no ampiasan'Andriamanitra ny olana sy ny olana amin'ny fiainantsika? >
< start="1143.27" dur="3.29"> Misaotra anao mangataka, satria ny tohiny manaraka >
< start="1146.56" dur="1.75"> na ny ampahany amin'ny andininy manaraka >
< start="1148.31" dur="2.61"> Mampiasa fomba telo Andriamanitra. >
< start="1150.92" dur="3.09"> Fomba telo, mampiasa fomba telo eo amin'ny fiainanao Andriamanitra telo. >
< start="1154.01" dur="4.18"> Voalohany, mizaha ny finoako ny olana. >
< start="1158.19" dur="2.03"> Izao, ny finoanao dia toy ny hozatra. >
< start="1160.22" dur="3.8"> Tsy azo hamafisina ny hozatra raha tsy nosedraina, >
< start="1164.02" dur="3.3"> raha tsy hoe ahinjitra, raha tsy atsofoka. >
< start="1167.32" dur="4.99"> Tsy mampisy hozatra mahery ianao raha tsy manao na inona na inona. >
< start="1172.31" dur="3.09"> Mivelatra hozatra mahery ianao amin'ny alàlan'ny fanitarana azy ireo >
< start="1175.4" dur="2.53"> ary manatanjaka azy ireo sy hizaha toetra azy ireo >
< start="1177.93" dur="2.7"> ary manosika azy ireo amin'ny fetra. >
< start="1180.63" dur="5"> Ka izy nilaza fa ny olana no tonga fitsapana ny finoako. >
< start="1185.88" dur="4.38"> Nilaza izy fa tonga mba hizaha toetra ny finoanao. >
< start="1190.26" dur="3.28"> Ankehitriny, io teny fitiliana io eo, izany dia teny >
< start="1193.54" dur="5"> tamin'ny andron'ny Baiboly izay nampiasaina hanadiovana metaly. >
< start="1198.61" dur="3.05"> Ary ny hataonao dia te handray metaly sarobidy >
< start="1201.66" dur="1.768"> toy ny volafotsy na volamena na zavatra hafa, >
< start="1203.428" dur="2.932"> dia atsipy ao anaty vilany lehibe iray ianao, ary taosinao ny hafanana >
< start="1206.36" dur="2.54"> amin'ny hafanana avo be, nahoana? >
< start="1208.9" dur="1.17"> Ao amin'ny mari-pana, >
< start="1210.07" dur="3.34"> may daholo ny loto rehetra. >
< start="1213.41" dur="4.05"> Ary ny hany sisa tavela dia ilay volamena madio >
< start="1217.46" dur="1.946"> na ny volafotsy madio. >
< start="1219.406" dur="3.164"> Izany no teny grika eto hizaha toetra. >
< start="1222.57" dur="4.54"> Afo mamelona io rehefa apetrak'Andriamanitra ny hafanana >
< start="1227.11" dur="1.705"> ary mamela izany eo amin'ny fiainantsika, >
< start="1228.815" dur="3.345"> mandoro zavatra tsy manan-danja izy. >
< start="1232.16" dur="2.94"> Fantatrao ve izay hitranga amin'ny herinandro ho avy? >
< start="1235.1" dur="2.134"> Stuff izay noheverinay rehetra fa tena zava-dehibe, >
< start="1237.234" dur="1.726"> tsapanay, hmm, nifanaraka aho >
< start="1238.96" dur="1.273"> tsara fotsiny fa tsy misy an'izany. >
< start="1241.1" dur="2.51"> Hanamboatra indray ny laharam-pahamehantsika izany, >
< start="1243.61" dur="2.41"> satria hiova ny zavatra. >
< start="1246.02" dur="4.22"> Ankehitriny, ny ohatra mahazatra amin'ny fomba hanaporofoan'ny olana ny finoanao >
< start="1251.17" dur="4.02"> no tantara momba an'i Joba ao amin'ny Baiboly. >
< start="1255.19" dur="1.75"> Misy boky iray manontolo momba an'i Joba. >
< start="1256.94" dur="3.49"> Fantatrao fa i Joba no lehilahy manankarena indrindra ao amin'ny Baiboly, >
< start="1260.43" dur="2.74"> ary tamin'ny andro iray, very ny zavatra rehetra izy. >
< start="1263.17" dur="2.82"> Namoy ny ankohonany rehetra izy, very ny fananany rehetra, >
< start="1265.99" dur="3.97"> namoy ny sakaizany rehetra izy, nanafika ny fianakaviany ny mpampihorohoro, >
< start="1269.96" dur="4.567"> nahazo aretina mitaiza sy nahatsiravina mafy izy >
< start="1276.283" dur="3.437"> tsy azo sitrana tsara. >
< start="1279.72" dur="1.323"> Eny ary, izy no terminal. >
< start="1282.109" dur="3.721"> Ary na izany aza, Andriamanitra dia nitsapa ny finoany. >
< start="1285.83" dur="3.27"> Ary naverin'Andriamani- tra indray izy taty aoriana >
< start="1289.1" dur="3.423"> izay nananany alohan'ny nandalovany ny fitsapana lehibe. >
< start="1293.59" dur="2.82"> Indray mandeha dia efa namaky teny fohy iray aho efa ela >
< start="1296.41" dur="2.92"> izay nilaza fa ny olona dia toy ny kitapo dite. >
< start="1299.33" dur="1.34"> Tsy fantatrao izay ao am-pony >
< start="1300.67" dur="2.67"> mandra-panidinanao ao anaty rano mafana. >
< start="1303.34" dur="3.09"> Ary avy eo ho hitanao ny tena ao anatiny. >
< start="1306.43" dur="2.77"> Efa nahita ny andro mafana ve ianao? >
< start="1309.2" dur="3.763"> Nanana iray tamin'ireny herinandro mafana na volana iny ve ianao? >
< start="1313.82" dur="3.78"> Efa ao anaty rano mafana isika izao. >
< start="1317.6" dur="2.41"> Ary ny zavatra hivoaka avy aminao dia inona ny ao anatinao. >
< start="1320.01" dur="1.33"> Tahaka ny marary nify. >
< start="1321.34" dur="4.15"> Raha manana fantsona nify aho ka manosika azy. >
< start="1325.49" dur="1.18"> Inona no ho avy? >
< start="1326.67" dur="0.9"> Hoy ianao dia tsara, toothpaste. >
< start="1327.57" dur="1.65"> Tsia, tsy voatery. >
< start="1329.22" dur="1.95"> Mety hiteny fofona nify any ivelany, >
< start="1331.17" dur="1.67"> fa afaka saosy marinara >
< start="1332.84" dur="2.6"> na voanjo na voaniho ao anatiny. >
< start="1335.44" dur="2.92"> Inona no hivoaka rehefa voatsindry fanerena >
< start="1338.36" dur="1.403"> izay ao anatiny. >
< start="1341.13" dur="3.603"> Ary amin'ny andro ho avy rehefa miatrika ny virus COVID ianao, >
< start="1346.266" dur="2.224"> ny zavatra hivoaka avy ao dia inona avy ny ao anatinao. >
< start="1348.49" dur="2.24"> Ary raha feno fangirifiriana ianao dia hivoaka. >
< start="1350.73" dur="2.23"> Ary raha feno fahasosorana ianao dia hivoaka. >
< start="1352.96" dur="3.79"> Ary raha feno fahatezerana na ahiahy na fanamelohana anao ianao >
< start="1356.75" dur="3.46"> na mahamenatra na tsy fahatokisana dia efa hivoaka. >
< start="1360.21" dur="4"> Raha feno tahotra ianao dia na inona na inona ao anaty ao >
< start="1364.21" dur="3.52"> inona no hivoaka rehefa tsindry anao ny fanerena. >
< start="1367.73" dur="1.44"> Ary izany no lazainy eto, >
< start="1369.17" dur="2.23"> manaporofo ny finoako izany olana izany. >
< start="1371.4" dur="5"> Fantatrao, taona lasa izay, nihaona tamin'ny lehilahy taloha iray aho >
< start="1376.98" dur="3.23"> nandritra ny fihaonambe taona maro lasa izay niverina tany Atsinanana. >
< start="1380.21" dur="1.74"> Heveriko i Tennessee. >
< start="1381.95" dur="3.91"> Ary izy, io lehilahy antitra io dia nilaza tamiko ny fomba hanafoanana azy >
< start="1387.13" dur="4.8"> no tombony lehibe indrindra teo amin'ny fiainany. >
< start="1391.93" dur="2.017"> Ary hoy aho hoe: "Eny ary, tiako ny mandre ity tantara ity. >
< start="1393.947" dur="1.523"> "Lazao amiko izany rehetra izany." >
< start="1395.47" dur="1.67"> Ary inona ilay asany >
< start="1397.14" dur="2.823"> amin'ny makiazy iray manontolo nandritra ny androm-piainany. >
< start="1400.83" dur="2.41"> Olon-tsoavaly izy nandritra ny androm-piainany. >
< start="1403.24" dur="3.34"> Fa indray andro mandritra ny fihenan'ny toe-karena, >
< start="1406.58" dur="3.607"> niditra tao ny lehibeny ary nanambara tampoka hoe "Voaroaka ianao." >
< start="1411.19" dur="3.54"> Ary ny fahaizany rehetra dia nivoaka ny varavarana. >
< start="1414.73" dur="4.62"> Ary nidina am-bolana niaraka tamin'ny vady izy >
< start="1419.35" dur="3.85"> ary fianakaviana sy tsy manana asa hafa manodidina azy, >
< start="1423.2" dur="2.923"> ary nisy ny resa-bola nitranga tamin'io fotoana io. >
< start="1427.03" dur="3.5"> Ary kivy be izy, ka natahotra. >
< start="1430.53" dur="1.77"> Ny sasany aminareo dia mety mahatsapa toy izany amin'izao fotoana izao. >
< start="1432.3" dur="1.58"> Mety efa nesorina sahady ianao. >
< start="1433.88" dur="1.76"> Angamba matahotra ny ho lasa ianao >
< start="1435.64" dur="2.63"> napetraka nandritra izao krizy izao. >
< start="1438.27" dur="2.45"> Ary tena kivy izy, natahotra. >
< start="1440.72" dur="1.827"> Hoy izy, izaho nanoratra io, hoy izy, "toa nahatsapa hoatr'izany aho >
< start="1442.547" dur="3.97"> "ny tontoloko efa niady tamin'ny andro nahavoaroaka ahy. >
< start="1446.517" dur="2.2"> "Rehefa nody anefa aho dia nolazaiko tamin'ny vadiko ny zava-nitranga. >
< start="1448.717" dur="3.57"> "ary nanontany izy hoe: 'Ka inona izao ataonao izao?' >
< start="1452.287" dur="2.98"> "Ary hoy aho, hatramin'izay nitifitra ahy dia. >
< start="1455.267" dur="3.9"> «Hotanterahiko foana izay efa nokasaiko hatao. >
< start="1459.167" dur="1.84"> "Aoka ianao ho mpanamboatra. >
< start="1461.007" dur="1.61"> "Hapindrako trano ny tranonay >
< start="1462.617" dur="2.413"> "Ary hiditra amin'ny sehatry ny trano aho." >
< start="1465.03" dur="2.887"> Ary hoy izy tamiko: "Fantatrao, ry Rick, ilay ezaka voalohany nataoko >
< start="1467.917" dur="4.13"> "ny fananganana efitrano fandraisam-bahiny roa kely." >
< start="1472.965" dur="2.115"> Izany no nataony. >
< start="1475.08" dur="4.267"> Nefa hoy izy: "Tao anatin'ny dimy taona, olo-tapitrisany aho." >
< start="1480.21" dur="2.99"> Izany lehilahy izany, ilay lehilahy noresahako, >
< start="1483.2" dur="3.5"> no Wallace Johnson, ary ny orinasa natombony >
< start="1486.7" dur="4.39"> rehefa avy nitifitra dia nantsoina hoe Holiday Inns. >
< start="1492.53" dur="2.877"> Nilaza tamiko i Wallace, "Rick, anio raha mahazo mahita aho >
< start="1495.407" dur="3.13"> "ilay olona nitifitra ahy, am-pahatsorana aho >
< start="1498.537" dur="2.143"> "misaotra azy noho izay nataony." >
< start="1500.68" dur="2.56"> Tamin'izay fotoana izay dia tsy takatro >
< start="1503.24" dur="2.83"> fa naninona aho no voaroaka, fa maninona no nilevina aho? >
< start="1506.07" dur="3.94"> Fa taoriana kelin'izay dia hitako hoe tsy nino an'Andriamanitra izany >
< start="1510.01" dur="4.483"> ary drafitra mahagaga hahafahako mandroso ahy amin'ny asan'ny safidiny. >
< start="1515.76" dur="3.05"> Manana olana ny olana. >
< start="1518.81" dur="1.17"> Manana tanjona izy ireo. >
< start="1519.98" dur="4.18"> Fantaro fa avy mamokatra izy ireo ary iray amin'ireo zavatra voalohany >
< start="1524.16" dur="3.984"> mamokatra finoana lehibe kokoa izy ireo, andramana ny finoanao. >
< start="1528.144" dur="3.226"> Laharana faharoa, indreto ny tombony faharoa amin'ny olana. >
< start="1531.37" dur="3.27"> Manampy ny fiaretako ny olana. >
< start="1534.64" dur="1.52"> Mampiorina ny fiaretako izy ireo. >
< start="1536.16" dur="2.23"> Izany no ampahany amin'ny andian-teny, hoy izy >
< start="1538.39" dur="5"> ireo olana ireo dia lasa mamorona faharetana. >
< start="1543.45" dur="2.33"> Mampitombo faharetana amin'ny fiainanao izy ireo. >
< start="1545.78" dur="1.91"> Inona no vokatry ny olana teo amin'ny fiainanao? >
< start="1547.69" dur="1.52"> Hery maharitra. >
< start="1549.21" dur="2.82"> Ara-bakiteny ny fahaizana miatrika tsindry. >
< start="1552.03" dur="2.253"> Androany dia antsointsika hoe: >
< start="1555.12" dur="1.79"> Ny fahaizana miondrika miverina. >
< start="1556.91" dur="3.197"> Ary iray amin'ireo toetra tsara indrindra tokony hianaran'ny ankizy rehetra >
< start="1560.107" dur="3.473"> ary ny olon-dehibe rehetra tokony hianatra ny hery mihetsika. >
< start="1563.58" dur="2.92"> Satria mianjera daholo ny olona rehetra, >
< start="1566.5" dur="2.05"> mandalo fotoan-tsarotra ny olona rehetra, >
< start="1568.55" dur="3.31"> Marary amin'ny fotoana hafa ny marary rehetra. >
< start="1571.86" dur="2.39"> Ny olona rehetra dia manana lesoka amin'ny fiainany. >
< start="1574.25" dur="2.7"> Ahoana ny fomba iatrehana ny tsindry. >
< start="1576.95" dur="3.613"> Ny fiaretana dia manohy hatrany ary mihantona hatrany. >
< start="1581.52" dur="1.99"> Ahoana, ahoana no hianaranao manao izany? >
< start="1583.51" dur="3.53"> Ahoana no hianaranao miatrika fanerena? >
< start="1587.04" dur="2.28"> Amin'ny alàlan'ny traikefa, io no hany fomba. >
< start="1589.32" dur="4.93"> Tsy mianatra mikarakara tsindry ianao amin'ny boky iray. >
< start="1594.25" dur="4.02"> Tsy hainao ny miatrika fanerena amin'ny seminera. >
< start="1598.27" dur="3.76"> Mianatra miatrika fanerena ianao amin'ny alàlan'ny fanerena. >
< start="1602.03" dur="2.53"> Ary tsy fantatrao izay ao anatinao >
< start="1604.56" dur="3.063"> mandra-pahatongan'ny tena nandehananao. >
< start="1609.77" dur="2.7"> Tamin'ny taona faharoa an'ny fiangonana Saddleback, 1981, >
< start="1612.47" dur="1.36"> Nandalo fotoam-pahaketrahana aho >
< start="1613.83" dur="2.823"> izay isan-kerinandro dia te hametra-pialana aho. >
< start="1617.64" dur="3.88"> Ary te hiala aho isaky ny alahady tolakandro. >
< start="1621.52" dur="3.14"> Nefa, nandia fotoan-tsarotra teo amin'ny fiainako aho. >
< start="1624.66" dur="2.3"> ary na izany aza dia apetrako eo anoloany ny tongotra iray >
< start="1626.96" dur="3.19"> amin'ny maha-Andriamanitra ahy, aza alao aho hanorina fiangonana lehibe, >
< start="1630.15" dur="1.973"> fa Andriamanitra ô, afaho aho amin'ity herinandro ity. >
< start="1633.01" dur="2.1"> Ary tsy ho kivy aho. >
< start="1635.11" dur="2.22"> Faly be aho fa tsy kivy. >
< start="1637.33" dur="3.09"> Saingy faly kokoa aho fa tsy nanary ahy Andriamanitra. >
< start="1640.42" dur="1.46"> Satria fitsapana izany. >
< start="1641.88" dur="5"> Ary nandritra io fotoam-pitsapana io dia nahatsapa ara-panahy aho >
< start="1647.51" dur="3.56"> sy ny herinaratra sy ara-pihetseham-po sy ara-tsaina >
< start="1651.07" dur="4.28"> izay nahafahako nandefa bolety isan-karazany taty aoriana >
< start="1655.35" dur="4.64"> ary miatrika fihenjanana be loatra eo imason'ny besinimaro >
< start="1659.99" dur="2.01"> satria nandeha tamin'io taona io aho >
< start="1662" dur="3.363"> amin'ny fahasarotana tsy mihetsika, mifanatrika. >
< start="1666.51" dur="5"> Fantatrao, i Amerika dia nanana fifankatiavana tamim-pitiavana. >
< start="1672.57" dur="2.113"> Tianay ny fanamorana. >
< start="1675.593" dur="3.187"> Amin'ny andro sy herinandro ho avy amin'ity krizy ity, >
< start="1678.78" dur="2.58"> be dia be ny zavatra tsy manelingelina. >
< start="1681.36" dur="1.13"> Manahirana. >
< start="1682.49" dur="2.95"> Ary inona no hataontsika amin'ny tenantsika >
< start="1685.44" dur="2.503"> rehefa tsy milamina ny zava-drehetra, >
< start="1688.96" dur="2.52"> rehefa tsy mila hitazomana foana >
< start="1691.48" dur="2.1"> rehefa tsy mahatsiaro tena ho tohizana ianao. >
< start="1693.58" dur="5"> Fantatrao, ny tanjon'ny triathlon iray na ny tanjon'ny diabe >
< start="1698.71" dur="3.1"> dia tsy momba ny hafainganam-pandeha, haingana faingana eo ianao, >
< start="1701.81" dur="1.86"> izany dia momba ny fiaretana. >
< start="1703.67" dur="2.34"> Vita ve ilay fifaninanana? >
< start="1706.01" dur="2.43"> Ahoana no fiomanana amin'ireo karazan-javatra ireo? >
< start="1708.44" dur="2.13"> Amin'ny alalanao fotsiny. >
< start="1710.57" dur="3.487"> Ka rehefa mivelatra amin'ny andro ho avy ianao, >
< start="1714.057" dur="2.213"> aza manahy momba izany, aza manahy momba izany. >
< start="1716.27" dur="3.02"> Manampy ny fiaretako ny olana. >
< start="1719.29" dur="3.21"> Manana zava-kendrena ny olana, misy dikany ny tanjona. >
< start="1722.5" dur="2.6"> Ny zavatra fahatelo izay nolazain'i Jakoba amintsika momba ireo olana >
< start="1725.1" dur="3.68"> dia ny olana izay mihamalalaka ny toetrako. >
< start="1728.78" dur="3.68"> Ary izy dia milaza izany ao amin'ny andininy efatra amin'ny toko James toko voalohany. >
< start="1732.46" dur="4.18"> Hoy izy nefa avelao ny hitohy >
< start="1736.64" dur="4.49"> mandra-pahatonga anao ho olona manana toetra tsara >
< start="1741.13" dur="3.663"> ary tsy mivadika tsy misy malemy. >
< start="1746.3" dur="1.32"> Tsy te hanana izany ve ianao? >
< start="1747.62" dur="2.42"> Tsy tianao ve ny maheno olona miteny hoe: >
< start="1750.04" dur="3.32"> io vehivavy io dia tsy misy malemy amin'ny toetrany. >
< start="1753.36" dur="4.53"> Io lehilahy io, tsy manana patatra malemy amin'ny toetrany. >
< start="1757.89" dur="3.04"> Ahoana no fomba hahaizanao an'io toetra matotra io? >
< start="1760.93" dur="4.58"> Avelao handeha hatrany ny fizotran'ny raharaha mandra-pahatonganao ho olona >
< start="1765.51" dur="3.38"> lahy sy vavy, manana toetra matotra >
< start="1768.89" dur="3.33"> ary tsy mivadika tsy misy malemy. >
< start="1772.22" dur="2.6"> Fantatrao fa nisy fianarana malaza natao maro, >
< start="1774.82" dur="4"> taona maro lasa izay tany Russia izay mahatadidy ny fanoratako, >
< start="1778.82" dur="4.08"> ary teo amin'ny vokatry ny fiainana andavanandro >
< start="1782.9" dur="5"> nisy fiantraikany amin'ny halavan'ny lavalava na ny halavan'ny biby samihafa. >
< start="1789.11" dur="3.6"> Ary napetrany ho mora ny fiainana ny biby sasany, >
< start="1792.71" dur="2.91"> ary nataony biby hafa sarotra kokoa >
< start="1795.62" dur="1.89"> sy tontolo henjana. >
< start="1797.51" dur="2.87"> Ary hitan'ny mpahay siansa fa ny biby >
< start="1800.38" dur="2.22"> izay napetraka tao anaty aina >
< start="1802.6" dur="2.88"> ary ny tontolo mora, toe-javatra, >
< start="1805.48" dur="4.73"> ireny fiainana iainana ireny dia nanjary malemy kokoa. >
< start="1810.21" dur="4.41"> Satria mora tokoa ny toe-javatra dia nanjary malemy izy ireo >
< start="1814.62" dur="2.22"> ary mora kokoa amin'ny aretina. >
< start="1816.84" dur="5"> Ary ireo izay tao anatin'ny toe-piainana mampiadana dia maty haingana >
< start="1821.9" dur="2.418"> noho ireo navela hahazo traikefa >
< start="1824.318" dur="3.105"> ny zava-tsarotra mahazatra eo amin'ny fiainana. >
< start="1828.72" dur="1.163"> Tsy mahaliana ve izany? >
< start="1830.81" dur="2.2"> Inona no marina amin'ny biby fantatro fa marina >
< start="1833.01" dur="1.94"> ny toetrantsika, koa. >
< start="1834.95" dur="4.92"> Ary amin'ny kolontsaina tandrefana indrindra amin'ny tontolo maoderina, >
< start="1839.87" dur="3.38"> mora be taminay tamin'ny fomba maro izany. >
< start="1843.25" dur="1.973"> Fiainana fivelomana. >
< start="1846.94" dur="1.71"> Tanjona iray nomen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao >
< start="1848.65" dur="2.67"> dia ny mamorona anao tahaka an'i Jesosy Kristy amin'ny toetra. >
< start="1851.32" dur="1.87"> Ny mieritreritra toa an'i Kristy, ny hanao tahaka an'i Kristy, >
< start="1853.19" dur="3.94"> miaina tahaka an'i Kristy, ho tia toa an'i Kristy, >
< start="1857.13" dur="2.2"> ho tsara toa an'i Kristy. >
< start="1859.33" dur="3.62"> Ary raha marina izany, ary miverimberina foana ny Baiboly, >
< start="1862.95" dur="2.13"> dia hitondra anao amin'ny zavatra mitovy ireo Andriamanitra >
< start="1865.08" dur="4.304"> fa nandalo Jesosy mba hampivoatra ny toetranao. >
< start="1869.384" dur="2.786"> Hoy ianao hoe tsara e, inona no tian'i Jesosy? >
< start="1872.17" dur="3.8"> Jesosy dia fitiavana sy fifaliana ary fiadanana sy faharetana ary hatsaram-panahy, >
< start="1875.97" dur="2.34"> ny vokatry ny Fanahy, izany rehetra izany. >
< start="1878.31" dur="1.4"> Ary ahoana no fomba namokaran'Andriamanitra ireo? >
< start="1879.71" dur="2.9"> Amin'ny fametrahana antsika amin'ny toe-javatra mifanohitra. >
< start="1882.61" dur="3.76"> Mianatra faharetana isika rehefa alaim-panahy tsy manam-paharetana. >
< start="1886.37" dur="3.37"> Mianatra fitiavana isika rehefa mametrapetraka olona tsy bizina. >
< start="1889.74" dur="2.49"> Mianatra fifaliana ao afovoan'ny alahelo isika. >
< start="1892.23" dur="4.67"> Mianatra miandry isika ary manana izany faharetana izany >
< start="1896.9" dur="1.56"> rehefa tsy maintsy miandry isika >
< start="1898.46" dur="3.423"> Mianatra hatsaram-panahy isika rehefa alaim-panahy tsy ho tia tena. >
< start="1902.77" dur="3.66"> Amin'ny andro tsy ho ela, dia tena mampihetsi-po tokoa >
< start="1906.43" dur="2.83"> hitady mpihaza ao anaty bunker fotsiny, mody miverina, >
< start="1909.26" dur="2.54"> ary hoy aho hoe, hikarakara anay izahay. >
< start="1911.8" dur="4.22"> Izaho sy ny tenako ary ny fianakaviako, izahay efatra ary tsy ao intsony >
< start="1916.02" dur="2.14"> ary manadino ireo olon-drehetra. >
< start="1918.16" dur="2.62"> Fa hampihena ny fanahinao izany. >
< start="1920.78" dur="2.51"> Raha manomboka mieritreritra momba ny olon-kafa ianao >
< start="1923.29" dur="3.254"> ary manampy ireo izay marefo, ny antitra >
< start="1926.544" dur="4.026"> sy ireo manana toe-javatra preexisting, >
< start="1930.57" dur="3.47"> ary raha manantona ianao, dia hitombo ny fanahinao, >
< start="1934.04" dur="3.34"> hitombo ny fonao, ho lasa olona tsara kokoa ianao >
< start="1937.38" dur="5"> tamin'ity faran'ity krizy ity fa tsy tamin'ny voalohany ianao, sa tsy izany? >
< start="1943.52" dur="2.98"> Hitanao, Andriamanitra, raha te hanorina ny toetranao izy >
< start="1946.5" dur="1.37"> afaka mampiasa zavatra roa izy. >
< start="1947.87" dur="2.92"> Afaka mampiasa ny Teniny izy, manova antsika ny fahamarinana, >
< start="1950.79" dur="3.56"> ary afaka mampiasa toe-javatra izy, izay sarotra kokoa. >
< start="1954.35" dur="4"> Ankehitriny, aleony Andriamanitra mampiasa ny fomba voalohany, ny Teny. >
< start="1958.35" dur="1.63"> Saingy tsy mihaino ny Teny foana isika, >
< start="1959.98" dur="3.77"> ka mampiasa toe-javatra izy mba hisarihana ny saintsika. >
< start="1963.75" dur="4.6"> Ary izany no sarotra kokoa, nefa matetika no mahomby kokoa. >
< start="1968.35" dur="3.23"> Izao, hoy ianao, eny, tsara, ry Rick, azoko izany, >
< start="1971.58" dur="4.22"> fa miovaova ny olana ary misy dikany ny azy, >
< start="1975.8" dur="3.18"> ary eto izy ireo mba hizaha toetra ny finoako ary izy ireo dia ho >
< start="1978.98" dur="2.47"> karazana isan-karazany, ary tsy tonga izy ireo rehefa maniry aho. >
< start="1981.45" dur="4.393"> Ary afaka mampiasa 'Andriamanitra mba hampivoarana ny toetrako sy hitombo ny fiainako. >
< start="1986.95" dur="1.72"> Ka inona no tokony hataoko? >
< start="1988.67" dur="4.94"> Ao anatin'ny andro vitsivitsy sy amin'ny herinandro ary mety ho volana mialoha >
< start="1993.61" dur="3.75"> rehefa miatrika io krizy coronavirus io isika, >
< start="1997.36" dur="4.09"> Ahoana ny fomba hamaliako ireo olana eo amin'ny fiainako? >
< start="2001.45" dur="1.98"> Ary tsy miresaka momba ny virus fotsiny aho. >
< start="2003.43" dur="2.747"> Miresaka olana izay ho avy aho >
< start="2006.177" dur="5"> ivelan'ny asa na ankizy any an-trano >
< start="2011.26" dur="3.12"> na izay zavatra hafa rehetra manelingelina ny fiainana >
< start="2014.38" dur="1.553"> toy ny mahazatra. >
< start="2017.04" dur="2.24"> Ahoana no tokony hamaliako ny olan'ny fiainako? >
< start="2019.28" dur="2.9"> Eny ary, tena manokana i James, >
< start="2022.18" dur="3.39"> Nomeny telo tena azo ampiharina isika, >
< start="2025.57" dur="4.45"> valinteny radikaly ry zareo, fa izy ireo no valiny tsara. >
< start="2030.02" dur="1.32"> Raha ny marina, rehefa miteny aminao aho dia ilay voalohany. >
< start="2031.34" dur="2.21"> handeha ianao, dia mila hitifiriko ahy ianao. >
< start="2033.55" dur="3.07"> Fa misy valiny telo, manomboka amin'ny R. daholo izy ireo. >
< start="2036.62" dur="2.76"> Ny valiny voalohany hoy izy dia rehefa ianao dia >
< start="2039.38" dur="4.46"> mandalo fotoan-tsarotra, mifalia. >
< start="2043.84" dur="2.41"> Mandeha, mandeha ho an'ny ankizy ve ianao? >
< start="2046.25" dur="1.73"> Izany dia toa masochistic. >
< start="2047.98" dur="2.29"> Tsy milaza aho hoe mifaly noho ny olana. >
< start="2050.27" dur="1.69"> Araho aho minitra vitsy monja. >
< start="2051.96" dur="3.54"> Lazainy fa hafaliana madio izany. >
< start="2055.5" dur="2.69"> Raiso toy ny namana ny olana ireo. >
< start="2058.19" dur="1.78"> Ankehitriny, aza diso hevitra aho. >
< start="2059.97" dur="3.14"> Tsy lazainy hoe sandoka io. >
< start="2063.11" dur="3.57"> Tsy miteny izy hoe mitafy tsiky plastika, >
< start="2066.68" dur="2.33"> mody mody fa tsara ny zava-drehetra ary tsy izany, >
< start="2069.01" dur="1.36"> satria tsy izany. >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Ilay Orphan Annie kely, ny masoandro >
< start="2073.49" dur="3.512"> hivoaka rahampitso, mety tsy hitranga rahampitso. >
< start="2077.002" dur="3.568"> Tsy milaza izy fa mandà ny zava-misy, na tsia mihitsy. >
< start="2080.57" dur="2.76"> Tsy lazainy hoe masochist izy. >
< start="2083.33" dur="2.87"> Ry zaza, mandalo fanaintainana aho izao. >
< start="2086.2" dur="1.72"> Mankahala ny fanaintainana tahaka ny ataonao Andriamanitra. >
< start="2087.92" dur="2.1"> Oh, mijaly aho, iza? >
< start="2090.02" dur="3.49"> Ary manana an'io complexe martyr io ianao, ary fantatrareo, >
< start="2093.51" dur="1.937"> Manana izany fahatsapana ara-panahy izany fotsiny aho rehefa tsy mahatsiaro ratsy. >
< start="2095.447" dur="2.983"> Tsia, tsia, tsia, tsy tian'Andriamanitra ho maritiora ianao. >
< start="2098.43" dur="1.54"> Tian'Andriamanitra tsy hanananao ianao >
< start="2099.97" dur="3.453"> toe-tsaina mikitika amin'ny fanaintainana. >
< start="2104.74" dur="2.5"> Fantatrao fa tsaroako ny fotoana nandalovako >
< start="2107.24" dur="3.21"> fotoana tena sarotra sy namana niezaka ny ho tsara fanahy >
< start="2110.45" dur="2.307"> ary hoy izy ireo hoe: "Fantatrao, Rick, mamporisiha >
< start="2112.757" dur="1.86"> "satria mety hiharatsy kokoa ny zavatra." >
< start="2115.61" dur="2.14"> Ary fantaro izay, niharatsy izy ireo. >
< start="2117.75" dur="2.23"> Tsy nisy fanampiana anefa izany. >
< start="2119.98" dur="2.225"> Nifaly aho ary niharatsy kokoa. >
< start="2123.31" dur="4.588"> Ka tsy resaka fisainana Pollyanna sandoka velively izany. >
< start="2127.898" dur="3.352"> Raha mazoto aho, dia hazoto aho. >
< start="2131.25" dur="2.88"> Tsia, tsia, tsia, dia manjary lalina lavitra noho izany. >
< start="2134.13" dur="5"> Tsy faly izahay, mihaino, tsy mifaly noho ilay olana. >
< start="2140.17" dur="5"> Mifaly izahay amin'ny olana, raha mbola eo am-pitiavana isika, >
< start="2145.71" dur="2.13"> mbola betsaka ny zavatra mifaly. >
< start="2147.84" dur="2.92"> Tsy ny olany akory fa ny zavatra hafa >
< start="2150.76" dur="2.514"> afaka mifaly amin'ny olana isika. >
< start="2153.274" dur="2.836"> Nahoana isika no afaka mifaly na eo aza ilay olana? >
< start="2156.11" dur="2.54"> 'Satria fantatsika fa misy antony ao. >
< start="2158.65" dur="1.74"> Satria fantatsika fa tsy handao antsika mihitsy Andriamanitra. >
< start="2160.39" dur="2.97"> Satria mahafantatra zavatra maro samihafa isika. >
< start="2163.36" dur="1.81"> Fantatsika fa manana tanjona Andriamanitra. >
< start="2165.17" dur="4.58"> Mariho hoy izy fa hevero ho hafaliana madio izany. >
< start="2169.75" dur="1.98"> Asio boribory ny teny hoe diniho. >
< start="2171.73" dur="4.8"> Saintsaino dia midika hoe manao tsinontsinona ny sainao. >
< start="2176.53" dur="2.22"> Nahazo fanitsiana toe-tsaina ianao >
< start="2178.75" dur="1.71"> tsy maintsy eto ianao. >
< start="2180.46" dur="3.869"> Safidinao ve ny mifaly? >
< start="2184.329" dur="3.201"> Ao amin'ny Salamo faha-34 andininy voalohany dia hoy izy >
< start="2187.53" dur="3.69"> Hisaotra ny Tompo aho amin'ny fotoana rehetra. >
< start="2191.22" dur="1.39"> Amin'ny fotoana rehetra. >
< start="2192.61" dur="0.92"> Ary hoy izy fa hataoko. >
< start="2193.53" dur="2.48"> Safidy ny safidinao, fanapahana izany. >
< start="2196.01" dur="1.66"> Fanoloran-tena, safidy. >
< start="2197.67" dur="4.08"> Ankehitriny, handia an'ity volana maro ity ianao >
< start="2201.75" dur="2.4"> na toetra tsara na toetra ratsy. >
< start="2204.15" dur="2.7"> Raha ratsy ny fihetsinao dia aleo ianao maka ny tenanao >
< start="2206.85" dur="2.35"> sy ny olon-drehetra manodidina anao. >
< start="2209.2" dur="3.15"> Fa raha tsara ny fihetsikao, dia safidinao ny mifaly. >
< start="2212.35" dur="1.76"> Hoy ianao, andao hojerena ny lafiny mamirapiratra. >
< start="2214.11" dur="3.09"> Andeha hojerentsika izay zavatra azontsika isaorana an’Andriamanitra. >
< start="2217.2" dur="2.15"> Ary aleo hahatakatra fa na amin'ny ratsy aza >
< start="2219.35" dur="2.88"> Andriamanitra afaka mitondra ny tsara amin'ny ratsy. >
< start="2222.23" dur="2.29"> Ataovy àry ny fanitsiana toe-tsaina. >
< start="2224.52" dur="3.25"> Tsy hihontsona aho amin'ity krizy ity. >
< start="2227.77" dur="3.23"> Mahafinaritra kokoa aho amin'izao krizy izao. >
< start="2231" dur="4.39"> Hifidy aho, safidiko ny hifaly. >
< start="2235.39" dur="3.41"> Eny, laharana faharoa, fangatahana faharoa R. >
< start="2238.8" dur="4.08"> Ary izany no angatahin'Andriamanitra fahendrena. >
< start="2242.88" dur="3.29"> Izany no tianao atao isaky ny misy krizy ianao. >
< start="2246.17" dur="2.39"> Maniry anao hangataka fahendrena Andriamanitra. >
< start="2248.56" dur="2.1"> Tamin'ny herinandro lasa, raha nihaino ny hafatry ny herinandro lasa ianao ianao. >
< start="2250.66" dur="2.72"> ary raha tsy nahita an'io ianao dia miverena an-tserasera ary hijery izany hafatra izany >
< start="2253.38" dur="5"> amin'ny fanaovana azy io amin'ny lohasahan'ny otrikaretina tsy misy tahotra. >
< start="2260.09" dur="2.15"> Safidinao ny mifaly, >
< start="2262.24" dur="2.733"> nefa izao dia mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ianao. >
< start="2265.89" dur="2.13"> Ary ianao mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ary mivavaka ianao >
< start="2268.02" dur="1.51"> ary mivavaka momba ny olanao ianao. >
< start="2269.53" dur="2.99"> Ny andininy faha-fito no milaza izany ao amin'ny Jakoba iray. >
< start="2272.52" dur="4.83"> Raha amin'ity dingana ity no misy aminareo tsy mahalala ny hihaona >
< start="2277.35" dur="4.05"> misy olana manokana, tsy misy dikanteny amin'ny Phillips io. >
< start="2281.4" dur="2.24"> Raha eo am-panaovana izany dia tsy misy olona mahafantatra ny fomba hihaona >
< start="2283.64" dur="3.44"> ny olana manokana dia tsy maintsy mangataka amin'Andriamanitra irery ianao >
< start="2287.08" dur="2.65"> izay manome fahalalany ho an'ny olona rehetra >
< start="2289.73" dur="2.6"> nefa tsy mahatsiaro tena ho meloka. >
< start="2292.33" dur="3.45"> Ary azonao antoka fa ny fahendrena ilaina >
< start="2295.78" dur="1.963"> homena anao. >
< start="2298.65" dur="2.18"> Nilaza izy ireo hoe nahoana ny zavatra rehetra no hangatahako fahendrena >
< start="2300.83" dur="1.35"> ao anatin'ny olana? >
< start="2303.29" dur="2.07"> Ka ianaranao avy amin'izany. >
< start="2305.36" dur="1.57"> Ka ianaranao avy amin'ilay olana, >
< start="2306.93" dur="1.48"> izany no antony nangatahanao fahendrena. >
< start="2308.41" dur="4.26"> Tena manampy anao raha mijanona tsy manontany hoe maninona, >
< start="2312.67" dur="3.04"> maninona no mitranga, ary manontany hoe: >
< start="2315.71" dur="1.45"> inona no tianao hianarako? >
< start="2318.09" dur="1.92"> Inona no tianao hataoko? >
< start="2320.01" dur="2.27"> Ahoana no fomba hivoizako amin'izany? >
< start="2322.28" dur="2.17"> Ahoana no fomba hahalavorary ny vehivavy? >
< start="2324.45" dur="4.51"> Ahoana no ahafahako lasa lehilahy tsara kokoa noho io krizy io? >
< start="2328.96" dur="1.32"> Eny, voasedra aho. >
< start="2330.28" dur="1.53"> Tsy hanahy ny amin'ny antony aho. >
< start="2331.81" dur="1.71"> Fa maninona no tsy maninona na dia izany aza. >
< start="2333.52" dur="3.77"> Ny zava-dehibe dia ny hoe, inona no hataoko, >
< start="2337.29" dur="3.7"> ary inona no tiako hianarako amin'ity toe-javatra ity? >
< start="2340.99" dur="2.71"> Ary raha te hanao izany ianao dia mila mangataka fahendrena. >
< start="2343.7" dur="2.56"> Ka hoy izy fa rehefa mila fahendrena ianao dia mangataha amin'Andriamanitra, >
< start="2346.26" dur="1.61"> Homen'Andriamanitra anao izany. >
< start="2347.87" dur="2.2"> Ka hoy ianao: Andriamanitra, mila fahendrena toy ny reny aho. >
< start="2350.07" dur="3.23"> Hankany an-trano ny zanako amin'ny volana ho avy. >
< start="2353.3" dur="2.22"> Mila fahendrena aho amin'ny raiko. >
< start="2355.52" dur="3.48"> Ahoana no fomba hitondrako rehefa tsy atahorana ny asantsika >
< start="2359" dur="1.553"> ary tsy afaka miasa aho izao? >
< start="2362.05" dur="1.45"> Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra. >
< start="2363.5" dur="1.84"> Aza manontany hoe maninona, fa manontania. >
< start="2365.34" dur="2.99"> Ka mifaly aloha, mahazo toetra tsara >
< start="2368.33" dur="3.14"> ny miteny hoe misaotra an'Andriamanitra tsy noho ny olana aho, >
< start="2371.47" dur="3.14"> fa misaotra an 'Andriamanitra amin zao olana aho. >
< start="2374.61" dur="2.92"> Satria mahasoa Andriamanitra na dia miaina aza ny fiainana. >
< start="2377.53" dur="2.137"> Izany no antony iantsoako an'ity andiany ity >
< start="2379.667" dur="5"> "Ny tena finoana izay miasa rehefa tsy miaina ny fiainana." >
< start="2385.41" dur="1.473"> Rehefa tsy mandeha ny fiainana. >
< start="2387.96" dur="1.69"> Ka faly aho ary mangataka. >
< start="2389.65" dur="4.32"> Ny zavatra fahatelo nolazain'i James fa hataony dia miala voly. >
< start="2393.97" dur="4.83"> Eny, mitsangatsangana fotsiny, aza misalasala >
< start="2398.8" dur="3.86"> rehetra ao anaty andian-dra. >
< start="2402.66" dur="2.64"> Aza miady saina be fa tsy afaka manao na inona na inona. >
< start="2405.3" dur="1.33"> Aza manahy momba ny ho avy. >
< start="2406.63" dur="2.83"> Andriamanitra milaza fa hikarakara anao aho, hatoky ahy. >
< start="2409.46" dur="2.42"> Matoky an'Andriamanitra hahalalanao izay tsara indrindra ianao. >
< start="2411.88" dur="2.17"> Miara-miasa aminy ianao. >
< start="2414.05" dur="4.84"> Tsy hainao vetivety ny raharaha atrehanao. >
< start="2418.89" dur="3.07"> Nefa hoy ianao fotsiny, Andriamanitra ô, miala sasatra aho. >
< start="2421.96" dur="2.28"> Tsy misalasala aho. >
< start="2424.24" dur="1.87"> Tsy misalasala aho. >
< start="2426.11" dur="2.76"> Matoky anao aho amin'ity toe-javatra ity. >
< start="2428.87" dur="3.15"> Ny andininy faha-valo no andininy farany hojerentsika. >
< start="2432.02" dur="1.26"> Eny, hijery bebe kokoa ao anatin'ny iray minitra isika. >
< start="2433.28" dur="5"> Saingy hoy ny andininy faha-valo fa tsy maintsy mangataka amim-pinoana amim-pahatsorana ianao >
< start="2438.9" dur="2.49"> tsy misy fisalasalana miafina. >
< start="2441.39" dur="1.86"> Inona no tadiavinao amin'ny finoana marina? >
< start="2443.25" dur="1.57"> Mangataha fahendrena. >
< start="2444.82" dur="2.07"> Ary lazao hoe: Andriamanitra, mila fahendrena aho, ary misaotra anao >
< start="2446.89" dur="1.26"> omenao ahy ny fahendrena. >
< start="2448.15" dur="2.89"> Misaotra anao aho, manome fahendrena ahy ianao. >
< start="2451.04" dur="3.06"> Aza misalasala, aza misalasala, >
< start="2454.1" dur="2.57"> fa ento mankany amin'Andriamanitra izany. >
< start="2456.67" dur="5"> Fantatrao, hoy ny Baiboly, teo aloha rehefa nanondro aho >
< start="2461.67" dur="3.24"> nilaza ireo karazana olana maro ireo izy. >
< start="2464.91" dur="1.8"> Fantatrao, miresaka momba ny maro an'isa izy ireo, >
< start="2466.71" dur="2.23"> maro, karazan-java-manahirana maro. >
< start="2468.94" dur="2.81"> Io teny io amin'ny teny grika, misy olana marobe, >
< start="2471.75" dur="3.11"> dia teny mitovy amin'izay voasarona ao amin'ny Petera Voalohany >
< start="2474.86" dur="1.97"> toko faha-efatra, andininy faha-efatra izay nilaza >
< start="2476.83" dur="4.11"> Andriamanitra dia manana karazana fahasoavana maro homena anao. >
< start="2480.94" dur="3.35"> Ny karazana fahasoavana maro samihafa avy amin'Andriamanitra. >
< start="2484.29" dur="5"> Mitovy ny maro loko, multifeatured, toa diamondra. >
< start="2489.339" dur="1.694"> Inona no lazainy eo? >
< start="2492.28" dur="2.08"> Fa ny olana rehetra anananao, >
< start="2494.36" dur="2.87"> misy fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay misy. >
< start="2497.23" dur="5"> Ho an'ny karazana fitsapana sy fahoriana isan-karazany >
< start="2502.74" dur="4.5"> ary ny fahasarotana, misy karazana fahasoavana sy famindram-po >
< start="2507.24" dur="2.25"> ary hery izay tadiavin'Andriamanitra homena anao >
< start="2509.49" dur="2.05"> mba hampifandraisina amin'io olana manokana io. >
< start="2511.54" dur="2.04"> Mila fahasoavana ho an'io ianao, mila fahasoavana ho an'ity, >
< start="2513.58" dur="1"> mila fahasoavana ho an'ity ianao. >
< start="2514.58" dur="3.76"> Andriamanitra milaza fa ny fahasoavako dia maro an'isa >
< start="2518.34" dur="1.99"> toy ny olana atrehinao. >
< start="2520.33" dur="1.27"> Ka inona aho no lazaiko? >
< start="2521.6" dur="1.74"> Lazaiko fa ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao, >
< start="2523.34" dur="2.44"> ao anatin'izany krizy COVID izany, >
< start="2525.78" dur="4.03"> ny devoly dia midika faharesena anao amin'ireny olana ireny. >
< start="2529.81" dur="4.41"> Fa Andriamanitra dia te hampivoatra anao amin'ireto olana ireto. >
< start="2534.22" dur="3.543"> Tiany ny handresy anao ry satana, Andriamanitra kosa te-hampivelatra anao. >
< start="2539.44" dur="2.12"> Ankehitriny, ireo olana tonga amin'ny fiainanao >
< start="2541.56" dur="3.34"> aza ataonao ho lasa olona tsara kokoa. >
< start="2544.9" dur="2.51"> Olombelona maro no tonga mangidy avy amin'ny em. >
< start="2547.41" dur="3.28"> Tsy manamboatra anao ho olona tsara kokoa izany. >
< start="2550.69" dur="2.96"> Ny fihetsikao no mahatonga ny fahasamihafana. >
< start="2553.65" dur="2.86"> Ary eo no tiako ho tadidinao aminao. >
< start="2556.51" dur="3.07"> Laharana faha-efatra, ny fahefatra tokony hotsarovana >
< start="2559.58" dur="3.75"> rehefa mandia olana ianao dia ny mahatadidy >
< start="2563.33" dur="1.99"> ny fampanantenan'Andriamanitra. >
< start="2565.32" dur="1.84"> Tsarovy ny teny fikasan'Andriamanitra. >
< start="2567.16" dur="1.28"> Midina ao amin'ny andininy 12 izany. >
< start="2568.44" dur="1.52"> Mamela ahy hamaky anao io fampanantenana io ianao. >
< start="2569.96" dur="2.363"> Jakoba toko voalohany, andininy faha-12. >
< start="2573.55" dur="5"> Sambatra izay maharitra amin'ny fitsapana, >
< start="2579.84" dur="2.67"> satria rehefa niatrika ny fitsapana Izy, >
< start="2582.51" dur="5"> ary handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nampanantenain'Andriamanitra izy, >
< start="2587.82" dur="2.75"> misy ny teny, ao amin'izay tia azy. >
< start="2590.57" dur="0.833"> Mamelà ahy hamaky azy io indray. >
< start="2591.403" dur="2.057"> Tiako hohenoinao tsara izany. >
< start="2593.46" dur="5"> Sambatra izay maharitra amin'ny fitsapana, >
< start="2598.84" dur="3.36"> izay mikarakara ny sarotra, >
< start="2602.2" dur="2.12"> sahala amin'ilay toe-javatra misy antsika amin'izao fotoana izao. >
< start="2604.32" dur="3.67"> Sambatra izay maharitra, izay maharitra! >
< start="2607.99" dur="3.87"> Izay matoky an'Andriamanitra, Izay mino foana mandritra ny fitsapana, >
< start="2611.86" dur="3.12"> satria rehefa niatrika ny fitsapana izy, dia mivoaka >
< start="2614.98" dur="2.72"> ao ambadika, tsy maharitra ity fitsarana ity. >
< start="2617.7" dur="1.4"> Misy ny fiafarany. >
< start="2619.1" dur="2.07"> Hivoaka amin'ny lafiny hafa amin'ny tonelina ianao. >
< start="2621.17" dur="4.41"> Ho azonao ny satroboninahitry ny fiainana. >
< start="2625.58" dur="3.38"> Eny, tsy fantatro daholo izay dikan'izany, fa tsara. >
< start="2628.96" dur="2.7"> Satroboninahitry ny fiainana izay nampanantenain'Andriamanitra >
< start="2631.66" dur="2.373"> ho an'izay tia Azy. >
< start="2635.73" dur="2.32"> Safidinao ny mifaly. >
< start="2638.05" dur="2.92"> Safidinao ny hatoky ny fahendren'Andriamanitra >
< start="2640.97" dur="1.72"> fa tsy misalasala. >
< start="2642.69" dur="4.21"> Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra hanampy anao amin'ny toe-javatra iainanao. >
< start="2646.9" dur="3.23"> Ary avy eo angataho amin'Andriamanitra ny faharetan'ny finoana. >
< start="2650.13" dur="2.27"> Ary lazao hoe: Andriamanitra, tsy miala aho. >
< start="2652.4" dur="1.793"> Dia ho lasa izany. >
< start="2655.329" dur="2.111"> Nisy olona nanontany indray, inona no tianao? >
< start="2657.44" dur="0.833"> andininy ao amin'ny Baiboly? >
< start="2658.273" dur="1.297"> Hoy, tonga izany. >
< start="2659.57" dur="1.273"> Ary nahoana no tianao io andininy io? >
< start="2660.843" dur="2.687"> Satria rehefa tonga ny olana dia fantatro fa tsy nijanona izy ireo. >
< start="2663.53" dur="1.194"> Tonga izy ireo. >
< start="2665.84" dur="2.88"> Ary marina izany amin'ity toe-javatra manokana ity. >
< start="2668.72" dur="3.983"> Tsy mijanona eo, efa tonga. >
< start="2673.56" dur="2.24"> Ankehitriny, te-hifandray amin'ity eritreritra ity aho. >
< start="2675.8" dur="3.77"> Tsy miteraka olana fotsiny ny krizy. >
< start="2679.57" dur="3.23"> Mampiharihary azy ireo matetika izany, ary matetika izany no mampiharihary azy ireo. >
< start="2682.8" dur="4.563"> Ity krizy ity dia afaka manambara fandrika sasantsasany amin'ny fanambadianareo. >
< start="2688.77" dur="2.76"> Manaporofo krizy ireo krizy ireo >
< start="2691.53" dur="1.823"> amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. >
< start="2694.26" dur="5"> Ity krizy ity dia afaka manambara fandrika sasany amin'ny fomba fiainanao, >
< start="2699.29" dur="2.593"> fa sarotra loatra aminao izany. >
< start="2702.949" dur="3.181"> Ary mazotoa mamela Andriamanitra hiresaka aminao >
< start="2706.13" dur="5"> inona ny tokony hanovana ny fiainanao, tsy mety? >
< start="2711.45" dur="1.7"> Maniry anao hieritreritra momba ity herinandro ity ianao, >
< start="2713.15" dur="3.44"> ary avelao aho hanome anao dingana vitsivitsy azo atao, sa tsia? >
< start="2716.59" dur="2.47"> Dingana azo ampiharina, isa voalohany, tiako ianao >
< start="2719.06" dur="5"> hamporisika olon-kafa hihaino an'io hafatra io. >
< start="2724.55" dur="1.25"> Hanao izany ve ianao? >
< start="2725.8" dur="3.603"> Arotsanao amin'ny namanao ve io rohy io? >
< start="2729.403" dur="3.337"> Raha izany no nampahery anao, ampitao izany, >
< start="2732.74" dur="2.3"> ary mahereza ho anao amin'ity herinandro ity. >
< start="2735.04" dur="4.84"> Mila fampaherezana ny olona rehetra manodidina anao amin'ity krizy ity. >
< start="2739.88" dur="1.779"> Ka alefaso 'rohy io. >
< start="2741.659" dur="5"> Roa herinandro lasa izay raha tao am-piangonana tao amin'ny tobinay izahay, >
< start="2747.52" dur="3.11"> tao amin'ny Lake Lake sy ireo mpiambina rehetra an'ny Saddleback, >
< start="2750.63" dur="3.53"> olona tokony ho 30 000 eo ho eo no niseho tao am-piangonana. >
< start="2754.16" dur="4.14"> Saingy tamin'ity herinandro lasa ity izay tsy maintsy manafoana serivisy izahay >
< start="2758.3" dur="1.87"> ary samy tokony nijery an-tserasera daholo, hoy aho, >
< start="2760.17" dur="3.38"> mandeha any amin'ny vondrona madinidinikao ny tsirairay avy ary manasa ireo mpifanila trano aminao >
< start="2763.55" dur="2.94"> ary asao ny namanao ao amin'ny tarika misy anao, >
< start="2766.49" dur="0.95"> nanana 181 000 izahay >
< start="2767.44" dur="5"> ISP amin'ny tokantranontsika mifandray amin'ny serivisy. >
< start="2776.3" dur="3.41"> Midika izany fa olona antsasa-tapitrisa angamba >
< start="2779.71" dur="1.96"> nijery ny hafatry ny herinandro lasa teo. >
< start="2781.67" dur="3.04"> Olona iray tapitrisa mahery na mihoatra. >
< start="2784.71" dur="3.63"> Satria, satria nilaza tamin'ny olon-kafa hijery ianao. >
< start="2788.34" dur="4.56"> Ary te hamporisika anao ho vavolombelon'ny vaovao mahafaly aho >
< start="2792.9" dur="2.79"> amin'ity herinandro ity ao amin'ny tontolo izay mila vaovao tsara. >
< start="2795.69" dur="1.4"> Mila mandre izany ny olona. >
< start="2797.09" dur="1.18"> Mandefasa rohy. >
< start="2798.27" dur="5"> Mino aho fa afaka mandrisika olona an-tapitrisany amin'ity herinandro ity >
< start="2803.29" dur="3.8"> raha alefa amin'ny hafatra daholo isika rehetra? >
< start="2807.09" dur="3.16"> Laharana faharoa, raha vondrona vitsivitsy ianao, tsy ho azontsika >
< start="2810.25" dur="3.45"> afaka hihaona, farafaharatsiny amin'ity volana ity, izay azo antoka. >
< start="2813.7" dur="3.95"> Ary koa amporisihiko anao hanangana fivoriana virtoaly. >
< start="2817.65" dur="1.79"> Afaka manana vondrona an-tserasera ianao. >
< start="2819.44" dur="0.97"> Ahoana no anaovanao an'izany? >
< start="2820.41" dur="2.63"> Eny, misy vokatra mivoaka ao toa an'i Zoom. >
< start="2823.04" dur="2.52"> Te-hizaha izany ianao, Zoom, maimaim-poana. >
< start="2825.56" dur="2.56"> Ary afaka miditra ao ianao ary miteny amin'ny olona rehetra mba haka Zoom >
< start="2828.12" dur="1.74"> amin'ny telefaona na amin'ny solosain'izy ireo, >
< start="2829.86" dur="3.58"> ary afaka mampifandray olona enina na valo na 10 ianao, >
< start="2833.44" dur="3.15"> ary afaka mahazo ny vondronao amin'ity herinandro ity ianao amin'ny Zoom. >
< start="2836.59" dur="3.19"> Ary mifankahita mifanena ianareo, toy ny Facebook Live, >
< start="2839.78" dur="2.933"> na toa ny sasany amin'ny hafa, fantatrao, >
< start="2844.84" dur="5"> inona ny iPhone rehefa mijery ny FaceTime. >
< start="2850.12" dur="1.82"> Eny, tsy afaka manao izany amin'ny vondrona lehibe ianao, >
< start="2851.94" dur="2.39"> nefa afaka manao izany amin'ny olona iray ianao. >
< start="2854.33" dur="3.52"> Ary mifamporisika mifanatrika amin'ny alàlan'ny teknolojia. >
< start="2857.85" dur="2.66"> Manana teknolojia izay tsy nisy izahay ankehitriny. >
< start="2860.51" dur="3.59"> Ka zahao ny Zoom ho an'ny vondrona virtual virtoaly kely. >
< start="2864.1" dur="1.17"> Ary tena eto an-tserasera >
< start="2865.27" dur="1.85"> afaka mahazo fampahalalana vitsivitsy koa ianao. >
< start="2867.12" dur="3.244"> Ny isa telo, raha tsy anaty vondrona vitsivitsy ianao, >
< start="2870.364" dur="4.096"> Hanampy anao hiditra ao anaty vondrona vondrona an-tserasera aho amin'ity herinandro ity. >
< start="2874.46" dur="2.33"> Ny hany azonao atao dia ny mandefa mailaka amiko, >
< start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ sad sadback, teny iray, SADDLEBACK, >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, ary hampifandray anao aho >
< start="2887.64" dur="2.57"> amin'ny vondrona an-tserasera, sa tsy izany? >
< start="2890.21" dur="2.79"> Hamarino tsara raha anisan'ny Eglizy Saddleback ianao >
< start="2893" dur="2.84"> hamaky ny pejinao isan'andro >
< start="2895.84" dur="2.03"> isan’andro mandritra izao krizy izao. >
< start="2897.87" dur="2.1"> Antsoina hoe "saddleback ao an-trano". >
< start="2899.97" dur="3.5"> Misy toro-hevitra, nahazo hafatra mampahery, >
< start="2903.47" dur="2.14"> dia nahazo vaovao izay azonao ampiasaina. >
< start="2905.61" dur="1.56"> Zavatra tena azo ampiharina. >
< start="2907.17" dur="2.17"> Te hifandray aminao isan'andro izahay. >
< start="2909.34" dur="1.32"> Makà "Saddleback ao an-trano." >
< start="2910.66" dur="2.69"> Raha tsy manana adiresy mailakao ianao, >
< start="2913.35" dur="1.42"> dia tsy mahazo an'io ianao avy eo. >
< start="2914.77" dur="2.46"> Ary afaka mandefa ny adiresy mailakao amiko ianao >
< start="2917.23" dur="4.41"> amin'ny PastorRick@saddleback.com, ary hataoko ao anaty lisitra ianao, >
< start="2921.64" dur="2.37"> ary ho azonao ny fifandraisana isan'andro, >
< start="2924.01" dur="3.76"> ny gazety "saddleback in the Home". >
< start="2927.77" dur="2.09"> Vao manakaiky fotsiny aho vao mivavaka >
< start="2929.86" dur="2.15"> amin'ny fanambarany hoe tena tiako ianao. >
< start="2932.01" dur="1.72"> Mivavaka aminao isan'andro aho, >
< start="2933.73" dur="1.9"> ary tsy mitsahatra mivavaka ho anao aho. >
< start="2935.63" dur="2.68"> Hifankahita isika. >
< start="2938.31" dur="2.33"> Tsy mbola nifarana teo ny tantara. >
< start="2940.64" dur="3.4"> Mbola eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra, ary hampiasa izany Andriamanitra >
< start="2944.04" dur="4.16"> hampitombo ny finoanao, hitondrana olona amin'ny finoana. >
< start="2948.2" dur="1.8"> Ary iza no mahalala izay hitranga. >
< start="2950" dur="3.07"> Azontsika atao ny manana fifohazana ara-panahy amin'izany rehetra izany >
< start="2953.07" dur="2.66"> satria ny olona matetika dia mitodika any amin'Andriamanitra >
< start="2955.73" dur="1.87"> rehefa mandia fotoan-tsarotra izy ireo. >
< start="2957.6" dur="1.09"> Avelao aho hivavaka ho anao. >
< start="2958.69" dur="1.66"> Dada Ray, tiako misaotra ny olona rehetra >
< start="2960.35" dur="1.48"> iza no mihaino izao? >
< start="2961.83" dur="5"> Enga anie isika hiaina ny hafatr'i Jakoba toko voalohany, >
< start="2967.39" dur="2.78"> ny andininy enina na fito voalohany. >
< start="2970.17" dur="4.25"> Enga anie isika hianatra fa ho tonga ny olana, hitranga izy ireo, >
< start="2974.42" dur="5"> izy ireo dia miovaova, misy tanjona izy ireo ary izany no tianao >
< start="2979.81" dur="2.41"> ampiasao ho tsara amin'ny fiainantsika izy ireo raha matoky anao izahay. >
< start="2982.22" dur="1.49"> Ampio izahay tsy hisalasala. >
< start="2983.71" dur="4"> Ampio izahay hifaly, hangataka, Tompo, >
< start="2987.71" dur="3.53"> ary hahatsiaro ny fampanantenanao. >
< start="2991.24" dur="3.45"> Ary mivavaka ho an'ny tsirairay aho fa hanana herinandro salama izy ireo. >
< start="2994.69" dur="2.87"> Amin'ny anaran'i Jesosy, amena. >
< start="2997.56" dur="1.07"> Samy tahian'Andriamanitra daholo ianao. >
< start="2998.63" dur="1.823"> Ampitao amin'ny olon-kafa izany. >